ShweMinThar: May 2019
အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံတာက နောက်ပိုင်းမှာ မမျှော်လင့်ဘဲဆိုတဲ့ မျှော်လင့်မထားတဲ့ ကိစ္စတွေဖြစ်လာနိုင်တာ တော်တေ်ာလေးများပါတယ်။ စိတ်ပူစိုးရိမ်စရာတွေလည်းရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ သားဆက်ခြားဆေးတစ်ခုခု မသုံးနေဘူးဆိုရင် လိင်ဆက်ဆံစဉ်မှာ အကာအကွယ်ရှိနေဖို့က လိုအပ်ပါတယ်။
မတော်တဆ အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမိပြီးရင် ဒါတွေလုပ်သင့်ပါတယ်။
ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လက္ခဏာတွေရှိနေလားဆန်းစစ်မယ် (အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံပြီး မိနစ် ၃၀ အတွင်း)
အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံတာက အမျိုးသားမှာရော အမျိုးသမီးမှာပါ STD (လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တဲ့ ရောဂါတွေ) ရရှိခံစားရနိုင်ခြေ ကိုတိုးစေနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာတော့ မမျှော်လင့်ဘဲ ကိုယ်ဝန်ရရသွားနိုင်ခြေကိုပါတိုးစေနိုင်တာပေါ့။ တကယ်လို့ STD ကူးစက်ခံလိုက်ရပြီဆိုရင် ရောဂါလက္ခဏာကတော်တေ်ာလေးကြာမှသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဖော်ပြမယ့် အချက်လေးတွေရောဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိသင့်ပါပြီ။
မျိုးပွားအင်္ဂါကနေ အကြောင်းအရင်းမရှိဘဲသွေးထွက်နေတာမျိုး – ဒီလက္ခဏာက အမျိုးသားတွေထက် အမျိုးသမီး တွေမှာပိုအဖြစ်များပါတယ်။ အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံပြီးတဲ့နောက် အမျိုးသမီးအင်္ဂါစပ်မှာ သွေးထွက်တာမျိုး ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ဒါကပုံမှန်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကပိုးဝင်ရောက်နိုင်ချေအရမ်းမြင့်နေပြီဆိုတဲ့ လက္ခဏာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံပြီးတဲ့အခါ မျိုးပွားအင်္ဂါမှာ သွေးထွက်နေလားစစ်ဆေးပါ။
ဆီးသွားနေစဉ်မှာ နာကျင်နေလား – ဒါကတော့ ဆီးလမ်းကြောင်းမှာ ပိုးဝင်နေပြီဆိုတာကို ပြသနေတဲ့ သိသာတဲ့လက္ခဏာတစ်ရပ်ပါ။ STD ခံစားနေရပြီဆိုတာကို သိရှိနိုင်တဲ့ လက္ခဏာတစ်ရပ်ဆိုလည်းမမှားပါဘူး။
လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်နာကျင်နေခြင်း – ဒါကအမျိုးသားမှာရော အမျိုးသမီးမှာပါခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်းမှာ နာကျင်မှုခံစားရမယ်ဆိုရင် လိင်ဆက်ဆံမှုကနေတဆင့် ရောဂါကူး စက်ခံရတာမျိုးဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
အရေးပေါ်သန္ဓေတားဆေးသောက်ပေးပါ (လိင်ဆက်ဆံပြီး ၇၂ နာရီ အတွင်း)
အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံပြီးတဲ့အခါ ၇၂ နာရီ (၃ရက်) အတွင်း အရေးပေါ်သန္ဓေတားဆေးသောက်ပေးရပါမယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မြန်သောက်လေ ပိုထိရောက်ာဆိုတာတော့ မမေ့ပါနဲ့။
သားအိမ်တွင်းထည့်ပစ္စည်း (IUD) ထည့်ပါ ( နာရီ ၁၂၀ အတွင်း)
Copper IUD (သားအိမ်တွင်းထည့်ပစ္စည်း) ကလည်း အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမိတာကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရရှိနိုင် ခြေကို ကာကွယ်ရာမှာ အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းပါ။ အမျိုးသမီးတိုင်း IUD ကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် အထူးသဖြင့်ကတော့ အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမိပြီး အရေးပေါ်သန္ဓေတားဆေးတွေ၊ သန္ဓေတားနည်းတွေအသုံးမပြုမိဘဲ အချိန်အရမ်းကြာနေတဲ့သူတွေ နဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် ၇၀ ကီလိုဂရမ် ထက်ပိုများနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံးပါ။
အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံပြီးတဲ့နောက် နာရီပေါင်း ၁၂၀ (၅ ရက်) အကြာမှာ သားအိမ်ထဲကို IUD ကိုထည့်သွင်းလို့ရပါတယ်။ IUD က ၅နှစ်ကနေ ဆယ်နှစ်လောက်ကြာတဲ့အထိ ကိုယ်ဝန်မရရှိအောင်တားဆီးပေးနိုင်ပြီး ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းကျော်အထိ အကာအကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
STI (လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သော ရောဂါပိုးများ) စစ်ဆေးမှုလုပ်ပါ ( ရက်သတ္တပတ် ၂ ပတ်ကြာမှာ လုပ်ရပါမယ်)
သင့်အနေနဲ့ သင့်မှာ STI ကူးစက်ခံထားရလားဆိုတာကို သေသေချာချာမသိနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံပြီး သီတင်းပတ် ၂ ပတ်အကြာမှာ STI စစ်ဆေးမှုလုပ်ပေးပါ။
ကိုယ်ဝန်ရှိ၊မရှိ စစ်ဆေးမှုလုပ်ပါ ( ရက်သတ္တပတ် ၃ ပတ်ကြာမှာလုပ်ရပါမယ်)
အကာအကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံပြီး ရက်သတ္တပတ် ၃ ပတ်လောက်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိ၊မရှိ စစ်ဆေးရပါမယ်။ ၃ ပတ်မတိုင်ခင်စစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်တော့ အဖြေကိုသေသေချာချာသိရှိနိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အိမ်မှာ ကိုယ်ဝန်ရှိ၊မရှိစစ်ဆေးတာက သေချာမှုမရှိဘူးလို့ယူဆတယ်ဆိုရင် ဆေးခန်းမှာ ဆီးနမူနာကို သွားရောက်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
နောက်နောင်မှာ အရေးပေါ်အခြေအနေတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားပါ
အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံတာကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ STI (လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တဲ့ ရောဂါတွေ) နဲ့ မလိုလားအပ်ဘဲ ကိုယ်ဝန်ရရှိသွားတဲ့ အနေအထားမျိုးကိုရှောင်ကြဉ်နိုင်စေဖို့ အတွက် လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုမျိုးကိုပဲ လုပ်ဆောင်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ဆေးတိုင်းမှာ တန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုတာမျိုးက ရှိပြီးသားပါ။ အရေးပေါ်သန္ဓေတားဆေးကို ခဏခဏသုံးစွဲမယ်ဆိုရင် မမျှော်လင့်ဘဲ ကိုယ်ဝန်ရသွားတာမျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ရအောင် ကာကွယ်နိုင်မယ့် အလွယ်ကူဆုံးသောနည်းလမ်းက ကွန်ဒုံးအသုံးပြုပေးဖို့ပါ။ ကွန်ဒုံးသုံးတဲ့အခါမှာလည်း ပေါက်ပြဲတာရှိ၊မရှိ။ ကွန်ဒုံးက သက်တမ်းလွန်နေ၊မနေကို စစ်ဆေးရပါမယ်။
အခုလောက်ဆိုရင် အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမိပြီးတဲ့အခါ မမျှော်လင့်ဘဲဆိုတဲ့ အခြေအနေတွေ ဖြစ်မလာအောင် ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကို သိလောက်ပြီထင်ပါတယ်။
မူရင်းတင်ဆက်သည့်စာမျက်နှာ - Hello ဆရာဝန်​
Posted by Alex Aung at 1:39 AM No comments:
Labels: Health, ဗဟုသုတ, ဆောင်းပါး
“စိတ်အပူလွန်တဲ့ မိဘများနဲ့ သူတို့ရဲ့ သားသမီးတွေ ဖတ်ဖို့”
(ကျွန်တော့်အကြောင်းတွေပါ ထည့်ရေးထားတာမို့ စာအနည်းငယ် ရှည်နိုင်ပါတယ်။ အချိန် ၃ မိနစ်လောက် ပေးပြီး ဖတ်ပေးပါ။)
ခုတင်ထားတဲ့ ပုံလေးက ပြီးခဲ့တဲ့ Parenting 4.0 ပွဲမှာ လူငယ်တစ်ယောက် ရေးသွားတဲ့ ရင်ဖွင့်စာလေးပါ။ အဲဒီပွဲက ဆယ်ကျော်သက်တွေအတွက် ရည်ရွယ်တဲ့ပွဲဖြစ်တာမို့ ဒီအတိုင်း ဟောပြောတာအပြင် လူငယ်တွေရော အုပ်ထိန်းသူတွေကိုပါ တစ်နေရာတည်း စုဝေးစေပြီး အပြန်အလှန် နားလည်မှု ရစေဖို့ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လည်း ပါပါတယ်။ ဘာလို့ဆို ဒီအရွယ်မှာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် နားမလည်နိုင်ကြတဲ့ ကိစ္စက သိပ်ကြီးတဲ့ ပြဿနာမို့လား။
အထူးသဖြင့် မိဘက သိပ်စိတ်ပူတတ်ပြီး တအား ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ မိသားစုတွေမှာ ပိုဆိုးပါတယ်။ သူတို့ဖြစ်ချင်တာ မဖြစ်ရလို့၊ မိဘက လုပ်ခွင့်မပေးလို့၊ မိဘက မသွားနဲ့ မလာနဲ့ဆိုပြီး ချုပ်ချယ်ထားလို့ မိဘနဲ့ ဘယ်လိုညှိနှိုင်းရမလဲ ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ မကြာခဏ ကြုံနေရတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့လိုလူငယ်တွေအတွက် ဒီဆောင်းပါးလေး ရေးလိုက်ရတာပါ။
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် ကျွန်တော်လည်း အဲ့လိုမိသားစုကနေ ကြီးပြင်းလာတာပါပဲ။ ကျွန်တော့်အဖေက သဘောင်္အင်ဂျင်နီယာ။ ဒီတော့ တစ်နှစ်မှာ ၁၀ လ လောက်က နိုင်ငံခြားရောက်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမေကပဲ အစစအရာရာ စောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်။ ဆိုတော့ အမေ့ရဲ့ဘ၀က ကျွန်တော်တို့ ညီအစ်ကို နှစ်ယောက်ပဲပေါ့။ ဒီတော့ လိုလေသေးမရှိအောင် ထားတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀က ပြီးပြည့်စုံခဲ့သလို ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေနဲ့လည်း ဘာမှ မလုပ်တတ် မကိုင်တတ်တွေ ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ ပုံမှန် အမေဖန်တီးပေးထားတဲ့ အနေအထားကနေ နည်းနည်းလေး သွေဖည်လိုက်တာနဲ့ အဆင်မပြေတော့ပါဘူး။ အဖိုးအဖွားအိမ်သွားလို့ ထမင်းပျော့ပျော့စားရတာ၊ အိမ်သာမှာ သန့်ရှင်းရေး လုပ်စရာ ပိုက်မရှိတာတွေက ကျွန်တော်တို့အတွက် သိပ်ကြီးတဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်နေခဲ့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ အသက်တွေကြီးလာပြီး အလုပ်စလုပ်တော့ တော်တော်လေးကိုမှ ခက်ခဲခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု မရှိတော့ဘူးပေါ့။ အမေကပဲ အကုန်လုပ်ပေးခဲ့တာကိုး။ နယ်ပြန်လို့ အထုပ် ၄-၅ ထုပ် ပါလာတယ်ဆိုရင်ကိုပဲ ဖြစ်ပါ့မလား စိတ်ပူနေပြီ။ တကယ်ဆို လူကလည်း သန်သန်မာမာကြီး။ နောက်ဆုံး မသယ်နိုင်ရင်တောင် ပိုက်ဆံပေးပြီး သယ်ခိုင်းလိုက်လို့ ရနေတာပဲ။ ဒါကိုတောင်မှ ဖြစ်ပါ့မလားလို့ စိတ်ပူနေမိတာ။
ခုလည်း ပြည့်စုံတဲ့ လူတစ်ယောက် မဖြစ်သေးပေမဲ့ ငယ်ငယ်တုန်းကနဲ့တော့ ပုံစံမတူတော့ပါဘူး။ အဲ့လိုမျိုး ဘယ်လိုပြောင်းလဲယူခဲ့သလဲ ဆိုတဲ့အပေါ် မူတည်ပြီး မိဘတွေအတွက်ရော၊ လူငယ်တွေအတွက်ပါ အကျိုးတခုခုရှိအောင် ဝေမျှသွားပါမယ်။
၁။ ညာပါ၊ သို့သော် Limit တော့ သိပါစေ။
မှတ်မှတ်ရရ ၇ တန်းနှစ်က ကျောင်းရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းမှာ ကျွန်တော် ပါရတယ်။ ကျွန်တော်အပါအ၀င် သူငယ်ချင်း ၅ ယောက်ပေါ့။ ဘုရားခန်း သန့်ရှင်းရေးကို မနက်တိုင်း တက်တက်ကြွကြွ လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ အဲ့လိုနဲ့ ကျောင်းက ကျွန်တော်တို့ကို ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားဖူး လွှတ်တယ်။ အကုန်လုံး လိုက်လို့ရပေမဲ့ ကျွန်တော် မလိုက်ရဘူး။ အမေက မထည့်လို့။ သူငယ်ချင်းတွေက ခရီးသွားရတော့မယ် ဆိုပြီး ပျော်နေရွှင်နေကြချိန် ကျွန်တော်က မှိုင်နေတော့ ဆရာမက စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး အမေ့ကို ပြောပေးရမလား တဲ့၊ လာမေးတယ်။ ကျွန်တော် မပြောခိုင်းဘူး။ ဘာလို့ဆိုတော့ ဆရာမ ပြောပေးလို့ လိုက်ရလည်း အမေ စိတ်ပူပြီး အိမ်မှာ ကျန်နေခဲ့ရမယ်ဆိုတာ သိတယ်လေ။ ဒီခေတ်လို ဖုန်းတွေဘာတွေကလည်း ရှိမှမရှိတာ။ အဲဒါနဲ့ ကိုယ်ကပဲ ရပါတယ် ဆရာမ၊ မလိုက်တော့ပါဘူး ဆိုပြီး တစ်ခါတည်း အပြတ်ငြင်းခဲ့လိုက်ရတယ်။
ခုအရွယ်မှာရော ပြောင်းလဲသွားလားဆိုတော့ အရင်လိုပဲ၊ အရင်အတိုင်းပဲ။ ကျွန်တော့်အမေလို တခြားမိဘတွေလည်း အများကြီး ရှိတယ်။ သူတို့ရဲ့ စိတ်ပူပန်မှုကို နားလည်ပေမဲ့ အဲဒီအနေအထားက ကိုယ့်အတွက် အဆင်မပြေဘူး။ ၇ တန်းနှစ်မှာ ကျိုက်ထီးရိုး မလိုက်ရတာက ပြဿနာ မရှိပေမဲ့ ၂၃ နှစ်မှာ အလုပ်မလုပ်ခိုင်းသေးတာက ပြဿနာ ရှိသွားပြီ။ ကိုယ့်မှာလည်း ကိုယ်လုပ်ချင်တာတွေ ရှိတယ်။ ဖြစ်ချင်တာတွေ ရှိတယ်။ ကလေးလည်း မဟုတ်တော့ဘူး။
ဒီတော့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ရှင်းတယ်။ ညာရပါတယ်။
ကျွန်တော့်အသက် ၂၃ နှစ်မှာ ဆေးကျောင်းကနေ ဘွဲ့ရတယ်။ အဲဒီတုန်းက ဆ.မ ရဖို့ ၆ လလောက် စောင့်ရတယ်။ အဲဒီစပ်ကြားကာလမှာ NGO အဖွဲ့တစ်ခုက ခေါ်တဲ့ သင်တန်းကို တက်ရင်း အဲဒီမှာ အလုပ်ခေါ်နေတယ် ဆိုတာ သိရတယ်။ အဲ့လိုနဲ့ ဆ.မလည်း ရပြီးရော၊ လျှောက်ကြည့်လိုက်တယ်။ အင်တာဗျူး သွားဖြေတော့ သားသားနားနား ၀တ်သွားရတာပေါ့။ ဒီတော့ သိသာနေရော။ အဲဒါနဲ့ မေးတော့ မင်္ဂလာဆောင် သွားမလို့ ဆိုပြီး ညာရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အင်တာဗျူးအောင်၊ အလုပ်ရ။ တာဝန်ကျတဲ့ ဖျာပုံကို စနေနေ့လို သွားရတော့မယ်ဆိုမှ ကြာသပတေးနေ့မှ ထုတ်ပြော။ ထင်ထားတဲ့အတိုင်း ငိုရော။ ကားဂိတ်လိုက်ပို့တော့ မျက်ရည်တွေနဲ့။ မတတ်နိုင်ဘူး။ အသည်းမာမာနဲ့ သွားရတာပဲ။ နောက်ပိုင်း ကြာလာတော့မှ တဖြည်းဖြည်း အဆင်ပြေသွားတာ။
ခုချိန်ထိလည်း ကျွန်တော် နေထိုင်မကောင်းဖြစ်ရင် ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ ဆေးခန်းကြိတ်ပြတယ်။ ဖြစ်တဲ့ပြဿနာ ထုတ်မပြောရဲဘူး။ ပြောလိုက်တာနဲ့ ပြဿနာသေးသေးလေးကအစ စိတ်တအားပူတာ။
သူတို့ကလည်း စိတ်ပူတယ်။ ကိုယ်ကလည်း သူတို့ကို စိတ်မပူစေချင်ဘူး။ ဒီတော့ ဖုံးရ၊ ကွယ်ရ၊ လိမ်ရ ညာရတယ်။
အပြစ်ရှိတယ်လို့တော့ မခံစားရဘူး။ ကျောင်းသွားမယ်ပြောပြီး EDM ပွဲ ရောက်နေတာမှ မဟုတ်တာ။ ဒါ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အဆင်ပြေတဲ့ Win-Win Solution ပဲလို့ ထင်တယ်။
ဒါပေမဲ့ အတိုင်းအဆလေးတော့ သိပါ။ သာမန်ဖျားတာနာတာ မပြောလည်း ရပေမဲ့ ကြီးကြီးမားမား ရောဂါဖြစ်ရင်တော့ ပြောရမှာပေါ့။ တော်ရုံအခက်အခဲဆို ကိစ္စမရှိပေမဲ့ သိပ်ကြီးတဲ့ စိတ်ဒုက္ခတွေဆိုရင်တော့ ရင်ဖွင့်အကူအညီတောင်းရမှာပေါ့။ ဒါကြောင့် ညာစရာရှိတာ ညာပါ။ သို့သော် အတိုင်းအထွာတော့ သိပါစေ။
(မိဘတွေအနေနဲ့လည်း ကိုယ့်သားသမီးကို ဒီလိုတွေ မဖုံးကွယ်စေချင်ဘူးဆို ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ပူပန်မှုကို လျှော့ပါ။ မလျှော့နိုင်တောင် သားသမီးရှေ့မှာ သိပ်မပြပါနဲ့)
၂။ သက်သေပြပါ၊ ထိပ်တိုက်မတွေ့ပါနဲ့။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီ ၇ ရက်နေ့မှာ ကျွန်တော် စာအုပ်သစ်ထွက်တဲ့ အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ပွဲလေးလုပ်တော့ ပွဲမှာ ရောင်းရအောင် စာအုပ် အုပ် ၄၀၀ မှာပါတယ်။ အဲဒါကို အဖေက များလိုက်တာ၊ ကုန်ပါ့မလား တဲ့။ ရုတ်တရက်ဆို အဖေက ငါ့ကို အထင်သေးတယ်ပေ့ါ။ တကယ်တော့ အဲဒါ အထင်သေးတာ မဟုတ်ဘူး။ အုပ် ၄၀၀ တောင် မှာပြီး မရောင်းရရင် သူ့သား စိုက်ရမှာကို စိတ်ပူတာပါ။
ဒါကြောင့် မိဘက ငါ့ကို အထင်သေးတယ်၊ ငါ့အရည်အချင်းကို မယုံဘူး မထင်ပါနဲ့။ တကယ်တော့ ကိုယ်ကျရှုံးမှာကို စိုးတာ၊ သူတို့ကျရှုံးတာထက် ကိုယ် အဲ့လိုဖြစ်မှာကို သူတို့က စိတ်ပူတာပါ။
တစ်ခါတစ်လေမှာလည်း ကိုယ့်ကို ဒါ မလုပ်စေချင်တဲ့အတွက် ပစ်ပစ်ခါခါ ပြောတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ မင်း သီချင်းဆိုတဲ့အလုပ်က ဘယ်လောက်ကောင်းလို့လဲ ဆိုတာမျိုးပေါ့။
ဒီတော့ သူတို့ကို အပြစ်မြင်မနေဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိရှိ လုပ်ပြပါ။ ကိုယ့်ဘက်က ဒါကို ၀ါသနာပါကြောင်း၊ အောင်မြင်အောင် လုပ်နိုင်ကြောင်း၊ ရလဒ်တခုခု မပြနိုင်သေးတောင် ကိုယ် အကောင်းဆုံး ကြိုးစားနေကြောင်း ပြသပါ။ စိတ်ပူလို့သာ တားနေကြတာဖြစ်ပြီး ဒီလိုသာ ကိုယ့်ဘက်က သက်သေပြနိုင်ရင် သူတို့ဘက်ကလည်း လိုက်လျောလာနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကို မိဘက ခွင့်မပြုလို့ တိုက်ပွဲဝင်ချင်တယ်ဆို အကောင်းဆုံးနည်းက အစာငတ်ခံတာ၊ အရွဲ့တိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ သက်သေပြခြင်းပါပဲ။
(မိဘများအနေနဲ့လည်း တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ကို ဆရာဝန်တွေ၊ အင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ချည်း တည်ဆောက်လို့ မရဘူး ဆိုတာ အမှတ်ရပေးပါ။ ရေထဲကျမှ ကူးခတ်နိုင်မယ့် ငါးကလေးတွေကို အပင်ပေါ် တက်ခိုင်းတာက ကိုယ့်အတွက်ရော၊ ငါးကလေးအတွက်ပါ အဆင်မပြေပါဘူး။ ဒါကြောင့် ငါးကလေးတွေကို ရေထဲဆင်းခိုင်းပြီး မျောက်ကလေးတွေကို အပင်ပေါ်တက်ခိုင်းလိုက်တာကသာ မိဘမေတ္တာကို အကောင်းဆုံး ပြသရာ ရောက်ပါလိမ့်မယ်။)
၃။ ဇွတ်လုပ်ပါ၊ သို့သော် သေချာမှုတော့ ရှိပါစေ။
ကျွန်တော်တို့က ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ နှစ်ယောက်လုံး ဆရာဝန်ပါ။ ဒါပေမဲ့ အစိုးရအလုပ်ကျ သိတဲ့အတိုင်း နှစ်ယောက်လုံး ၀င်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် လခကြောင့်ပါ။ အသက် ၃၀ ပတ်ချာလည်လောက် ရှိနေသည်အထိ သားနှစ်ယောက်ကို ဒီအတိုင်း တင်ကျွေးထားမလား ဆို မိဘကတော့ ကျွေးမယ်ပဲ ပြောမှာပါပဲ။ ကိုယ်ကတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် သိဖို့ လိုပါမယ်။ အစိုးရအလုပ်ဝင်မယ်ဆို တစ်ချိန်မှာ ပါမောက္ခတွေ ဘာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပေမဲ့ လတ်တလောတော့ ကိုယ့်စရိတ်ကိုယ်တောင် အနိုင်နိုင် ဖြစ်ရမှာပါ။ ပါမောက္ခဖြစ်မယ် ဆိုတာကလည်း ရုပ်ရှင်လောကထဲ ၀င်ရသလိုပဲ၊ လူတိုင်းကတော့ စူပါမင်းသား ဖြစ်ချင်ပေမဲ့ အဲဒီထဲက လက်ချိုးရေလို့ ရတဲ့ အရေအတွက်လောက်သာ နေတိုးတို့၊ မြင့်မြတ်တို့ ဖြစ်လာတာပါ။ ဒီတော့ အကြီးဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်က အပြင်မှာပဲ လုပ်ဖို့ ရွေးချယ်ရပါတယ်။ အဲ့လိုဆုံးဖြတ်စမှာတော့ မကြိုက်ဘူးပေါ့။ သူတို့က အစိုးရအလုပ် ၀င်စေချင်တာကိုး။ ဒါပေမဲ့ မတတ်နိုင်ဘူး။ ခေါင်းမာမာနဲ့ ရှေ့ဆက်ရတာပဲ။
ဆိုလိုတာက တချို့ကိစ္စတွေမှာ မိဘက ကိုယ့်လောက် မသိပါဘူး။ အထူးသဖြင့် သူတို့နယ်ပယ် မဟုတ်ရင်ပေါ့။ အဲဒီအပြင် သူတို့ဟာ သားသမီးကို ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ မပြတ်မသားတွေ လုပ်တတ်ကြတယ်။ (ဘယ်မိဘကတော့ မင်းတို့ ကိုယ့်စရိတ်ကိုယ်ရှာကြလို့ ပြောထွက်မလဲနော်) ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် သိရပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ပြတ်သားရပါတယ်။ ဇွတ်လုပ်ရပါတယ်။
အသက်ငယ်ငယ်အရွယ်မှာ အဲ့လိုဇွတ်လုပ်တာက တစ်ခါတစ်လေတော့ မကောင်းပါဘူး။ ကိုယ့်မှာက အတွေ့အကြုံ နည်းသေးတာကိုး။ ဥပမာ အဆိုတော်အလုပ်ဟာ လတ်တလောတော့ အဆင်ပြေပေမဲ့ ရေရှည်အတွက်ကျ အဆင်ပြေချင်မှ ပြေတာ။ ဒါကို ငယ်သေးတဲ့ ကိုယ့်အနေနဲ့ကျ စဉ်းစားချင်မှ စဉ်းစားမိမှာပါ။ ဒါကြောင့် ဆရာသမားတွေ၊ လူကြီးတွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီးမှဖြစ်ဖြစ်၊ သေချာလေ့လာပြီးမှဖြစ်ဖြစ်တော့ ဇွတ်လုပ်စေချင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ မိဘတွေကို သိစေချင်တာလေး ရှိပါတယ်။
ကိုယ့်သားသမီး လမ်းစမ်းလျှောက်စမှာ ချော်လဲပြီး ထိမိခိုက်မိတာက ပြဿနာ မဟုတ်ဘူး။ လမ်းမလျှောက်တတ်တော့တာကမှ ပြဿနာပါ။ ဒါကြောင့် စိတ်အပူလွန်တာတွေကို လျှော့ပါ။ ခက်ခဲမယ် ဆိုတာတော့ သိပါတယ်။ သို့သော် မတတ်နိုင်ဘူး။ ကြိုးစားရမှာပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်အပူလွန်ခြင်းက သားသမီးတွေရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို အားနည်းသွားစေနိုင်တယ်၊ တက်လမ်းကို ပိတ်စေနိုင်တယ် ဆိုတာကို သဘောပေါက်ထားရင်တော့ ကြိုးစားရတာ နည်းနည်းပိုလွယ်သွားမယ် ယူဆလို့ ဒီဆောင်းပါးကို ရေးလိုက်ရခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
(၂၅.၅.၂၀၁၉ ထုတ် Voice Weekly ပါ ဆောင်းပါးအား အနည်းငယ် တည်းဖြတ်ထားပါသည်)
Posted by Alex Aung at 5:08 AM No comments:
Labels: Opinion, Relationship Advice, ကလေးသူငယ်
ဒီရက်ပိုင်းထဲ အင်တာဗျူးလေးတွေ တော်တော်ထိုင်ဖြစ်တော့ မြင်တွေ့တာလေးတွေကို ရေးချင်တဲ့စိတ်လေး ပေါ်လာတာနဲ့လည်း ဒီဆောင်းပါးလေးကို ပြန်ရေးမိတာပါ။ အလုပ်ခေါ်တဲ့အခါ လျောက်ထားလာကြတဲ့ အလုပ်လျှောက်ထားတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ သိထားသင့်တာလေးတွေကို မျှဝေချင်တာလည်းပါပါတယ်။
အရေးအကြီးဆုံးအချက်က အလုပ်အင်တာဗျူးမှာ စကားပြောစွမ်းရည်ရှိဖို့ပဲ၊ စကားတွေ ဖောင်ဖွဲ့နေ အောင်ပြောတာ၊ အထင်ကြီးခံရအောင် စကားလုံးကြီးကြီးတွေ ပြောတာမျိုးမဟုတ်ပဲ မိမိ တတ်ထားသမျှကို တစ်ဖက်လူနားလည်အောင် ပြောတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
မိတ်ဆွေက ကိုယ့်ရဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခု သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုခုကို ရောင်းချဖို့ စီစဉ်ဆောင်ရွက်မယ် ဆိုရင်တော့ မဖြစ်မနေ လိုအပ်လာတာက ကိုယ့်ထုတ်ကုန်အကြောင်းလူသိစေဖို့ လုပ်ရမှာက မဖြစ်မနေပါပဲ။ ဒါမှလည်း ကိုယ့်ထုတ်ကုန်ကို သူများတွေစိတ်ဝင်စားလာမယ်။ ယုံကြည်အားကိုးလာကြမယ်၊ ဒါမှ ကိုယ်လည်း အကျိုးအမြတ် ရှိမယ်ပေါ့။ ဒါကို ကြော်ငြာတယ် လို့ အကြမ်းဖျင်းသတ်မှတ်ထားမယ်။
ဒါဆိုရင် တော့ ကိုယ့် အကြောင်း ကို သိစေချင်မယ်၊ တနည်းအားဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့အရည်အချင်း လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းကို တစ်ခြားလူ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေက အသိအမှတ်ပြုနိုင်ဖို့ ကြော်ငြာကောင်းဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကို တနည်းဆိုရရင် Personal Branding လို့ပြောလို့ ရပါတယ်။
အပြောစွမ်းရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်ပါဝင်စားစွာ လေ့လာထားနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်ဖတ်မိတဲ့ စာအုပ်လေး အကြောင်း အရင်ဆုံး ပြောပြပါမယ် ။
“ရုပ်ချောသူထက် အပြောကောင်းသူကို ပို၍ ချစ်ကြသည် ” ဆရာဖေမြင့် ရဲ့ အဟော အပြော ကောင်းနည်း စာအုပ်ထဲက စိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ စကားစုလေး တစ်ခုပေါ့။ အပြောလည်း ကောင်း၊ ရုပ်လည်းချောတယ်ဆိုရင်ဖြင့် ပိုပိုပြီးချစ်ခင်ခြင်းခံရမယ်ဆိုတာကို တွေးမိပါတယ်။ ဒါနဲ့စကားမစပ် အပြောကောင်းတိုင်း လူချစ်ခင်လူခင် များပါ့မလား ဆိုတာကိုလည်း ရှထောင့်တစ်မျိုးကနေ ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့မိတယ်။ တကယ်တမ်း လက်တွေ့ မကျတဲ့၊ လုပ်ဆောင်ချက်မပါတဲ့ အပြောအဆိုမျိုးက တစ်ဖက်သားယုံကြည်ဖို့ လိုအပ်နေအုန်းမှာ အသေအချာ ပါပဲ။
ရုံးမှာ ဝန်ထမ်းလိုအပ်တဲ့အတွက် အလုပ်ခေါ်ထားတော့ Email ကနေပို့လာတဲ့ CV လေးတွေကို ကြည့်ပြီး ဒီအကြောင်းလေးစဉ်းစားမိတယ်။ အလုပ်ခေါ်တိုင်းလိုလိုမှာ လုပ်သက် ဦးစားပေးခေါ်ထားတာတွေများတော့ CV တွေထဲမှာလည်း များပြားလှတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေက အသက်အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ကို တွေ့ရပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေပြန်စဉ်းစာမိတာက ၁၅နှစ်နဲ့ အလုပ်လုပ်ခဲ့လေသလားဆိုတာကိုပါတွေး မိသွားတာပေါ့။ လူချင်းတွေ့မှ လုပ်သက် (၆)လလောက်ကို တစ်နှစ်ခွဲဖြစ်အောင်ရေးထားမှန်းသိလိုက်ရတဲ့ အခါ အထင်ကြီး အောင်ကြော်ငြာနည်း ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ လူချင်းတွေ့ပြီးမေးတဲ့ အင်တာဗျူးတွေမှာ တကယ်တမ်း အပြောကောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဒါကတကယ်ပြောတာပါ၊ ကိုယ်ဘာလုပ်နိုင်တာလဲဆိုတာကို မပြောတက်သေးသ၍ အလုပ်ရှင်က စိတ်ဝင်စားမှာ မဟုတ်သလို ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကိုယ်လုပ်နိုင်တာကို အဆင့်အတန်းခပ်မြင့်မြင့်ပြောနိုင်လေ ကိုယ်အတွက် ပိုပြီး အခွင့်အလမ်းရှိလေလေပါပဲ။ နည်းပညာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အလုပ်မျိုးတွေမှာ Skill Test စစ်ဆေးကြပေမဲ့ ကိုယ့်က စီမံခန့်ခွဲမှုနယ်ပယ်မှာ လျှောက်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်လုပ်ဆောင် အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ၊ ကိုယ်လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာ အကျဉ်းချုပ်လောက်ကိုတော့ မိတ်ဆွေက ပညာရှင်ဆန်ဆန် ပြောပြတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဥပမာပေးရရင် အင်တာဗျူးမှာ Marketing Plan, Human Resource Planning တွေကို ဘယ်သူကမှ ထိုင်ဆွဲမခိုင်းသလို၊ ဆွဲလို့လည်းမရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒါတွေကို ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ အကျဉ်းချုပ်ကိုတော့ ပြောပြချင် ပြောပြရပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ မိတ်ဆွေက အပြောကောင်းဖို့ လိုကို လိုပါတယ်။
ကြော်ငြာကောင်းသူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး လက်ရှိအတွေ့အကြုံအရပြောရရင် ရုံးမှာဒီဇိုင်းဌာန အတွက် AutoCAD ခေါ်ပေးတော့ CV တွေပို့ကြတာပေါ့။ ဒီအထဲမှာ တော်တော် များများကတော့ ဘာလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ CV တွေကတော့ ထုံးစံတိုင်းပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ မှတ်မှတ်ရရ အလုပ်လျှောက်တဲ့ သူတစ်ယောက်က အလုပ်လျှောက်လွှာအပြင် လုပ်ငန်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ သူဆွဲထားတဲ့ 2D, 3D Auto Card တစ်ပုံစီ တွဲပို့ပေးလိုက်တယ်။ အင်ဂျင်နီယာဌာအနေနဲ့ CV ကြည့်ယုံနဲ့ သဘောကျနေမှာ အသေအချာပါပဲပေါ့။ သူရဲ့အရည်အချင်းကို လူမတွေ့ခင် ကျိတ်ပြီး သဘောကျနေ ကြတာပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့ လူကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါ သူဆွဲထားတဲ့ပုံ မဟုတ်ကြောင်းနဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုသိပ်မရှိလှတာကို တွေ့ကြပြန်တော့ ကြော်ငြာကောင်းသူကြီးရယ်လို့ တွေးမိပြန်ပါတယ်။
အလုပ်လျှောက်ရာမှာ ကြော်ငြာကောင်းဖို့လိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မိတ်ဆွေက ရိုးသားပွင့်လင်းပြီး ကိုယ့်သိတာ၊ တက်တာကို အဆင့်မြင့်မြင့် စကားလုံးတွေနဲ့ ရေးသားတက်ဖို့ပါ။ လိမ်စရာ၊ ကွယ်ဝှက်စရာတွေ ထားရှိနေလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ဥပမာ ကိုယ်က အရောင်းအဝယ်အပိုင်းမှာ ဖောက်သည်တွေနဲ့ ဆက်သွယ်ဆက်ဆံရတယ်။ နောက်ပြီး Customer Relationship Management (CRM) အပိုင်းကို ဘယ်လိုလုပ်ရတယ် ဘာညာ လောက်တော့ လုပ်လို့ရပါတယ်။ ကိုယ်မလုပ်ဖူးတာမဟုတ်ပဲ လုပ်ဖူးတာကို ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားအောင် ရေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါက ကိုယ့်အပေါ် ရွေးချယ်မယ့်သူအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အထင်ကြီးမှုကို ကနဦး ရယူလိုက်တာပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ အင်တာနက်ကရှာလာတဲ့ JD တွေဖြည့်ရေးထားယုံလောက်ဆိုရင်တော့ မိတ်ဆွေက တကယ့် လက်တွေ့မှာ ပြောပြနိုင်ဖို့ခက်ခဲနေပါလိမ့်မယ်။ နောက်ပြီး လူတစ်ယောက်ဟာသူဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာ တစ်ခြားသူတွေသိဖို့ထက် ဘာတွေလုပ်နိုင်လဲဆိုတာကိုသိအောင် ဖော်ပြခြင်းဟာလည်း ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ဆိုင်ရာ လစ်ဟာပြသမှုတစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့် ဒါကလည်း Personal Branding ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကို ပိုင်ဆိုင်ကိုင်တွယ်နိုင်တဲ့အခါ ကိုယ်ရဲ့ရှိပြီးသားအရည်အချင်းကို တစ်ခြားသူတွေက ပိုပြီးအသိအမှတ် ပြုနိုင် မှာပါ။ ဆက်ပြီးတော့ ပြောရရင် လူ့စိတ်သဘာရ ဆင့်ကဲတွေးခေါ်မှုဖြစ်စဉ် တွေရှိပါတယ်။ လူတစ်ယောက်က မိတ်ဆွေကို တော်တယ်၊ အရည်အချင်းရှိသူ လို့ သတ်မှတ်ပြောဆိုတယ် ဆိုကြပါစို့။ မိတ်ဆွေအကြောင်းမသိ သေးတဲ့ လူတစ်ယောက်က ဟုတ်နိုးနိုး ထင်တက်တယ်။ ဒါက လူ့တွေရဲ့ တွေးထင်မြင်တက်တဲ့ သဘော သဘာဝပါ။
I Phone ကိုလူတွေကြိုက်ကြတယ်။ ဘာကောင်းလဲလို့ အတိအကျပြောနိုင်တဲ့လူက အသုံးပြုသူတွေထဲမှာ ဘယ်လောက်များရှိမလဲ။ ဒါက ဘာကိုပြသလဲဆိုရင် အရည်အသွေးကောင်းကြောင်းပြသတဲ့ ထုတ်ကုန်တွေမှာ သူတို့ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းကို လူသိအောင် ပိုမိုကြော်ငြာရတယ်ဆိုတာကိုပါပဲ။ တစ်ဖက်က ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် တကယ်အရည်အသွေးကောင်းရင် သုံးစွဲသူက အသုံးပြုကိုပြုရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားက လက်တွေ့ မကျသလိုဖြစ်နေတက်ပါတယ်။ ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်ငြာတက်ဖို့လိုပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ မှန်ကန်တဲ့ကြော်ငြာခြင်းဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းရှိသူတွေဟာ ပတ်ဝန်းကျင်က အသိအမှတ်ပြုခံရတဲ့ အချိန်အခါမှာဆိုရင် ပိုပြီးအောင်မြင်ကျော်ကြားဖို့ အခွင့်အလမ်းများပါတယ်။ ဒီတော့ ကြော်ငြာကောင်းသူဖြစ်ဖို့ အရင်ဆုံးလုပ်ရမှာက ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်ကို သိဖို့လိုပါတယ်။
ဒါကအရေးကြီးတဲ့အချက်ပါပဲ ၊ ကိုယ်ဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုတာကိုသိမှ ကိုယ်အားသာချက်ကို ဘယ်လို အသုံးချလို့ ရမလဲကို သိရှိနိုင်မယ်၊ ဒီအားသာချက်ကို အသုံးပြုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြော်ငြာနိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအပိုင်းမှာဆက်စပ်ပြီးတင်ပြရရင် ထုန်ကုန်တစ်ခု ကြော်ငြာခြင်းနဲ့ ယှဉ်ထိုး ဖော်ပြချင်ပါတယ်။ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု ပေါက်မြောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ တစ်ခြားကုန်ပစ္စည်းများနဲ့ ထူးခြားစွာခွဲခြားထား နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီတော့ အရေးကြီးတဲ့ လက္ခာတွေဖြစ်တဲ့ –
o အသွင်အပြင် (Features)
o စတိုင် (Style)
o ယုံကြည်စိတ်ချရမှု (Reliability)
o ဝန်ဆောင်မှု (Service)
o အမှတ်တံဆိပ်သတ်မှတ်ခြင်း (Brand Naming)
ဆိုတာတွေရှိနေမှ ကွဲပြားခြားနားစွာ တည်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေဟာထုတ်ကုန်တွေအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရာမှာသုံးတဲ့ Product Decision လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာ တစ်ခြားထုတ်ကုန်များနဲ့ ခွဲခြားနိုင်ရေး အတွက် သတ်မှတ်ချက်အချို့ပါ။
မိတ်ဆွေက ကိုယ့်အကြောင်းကို ကြော်ငြာတော့မယ်ဆိုရင်တော့ ဒိအချက်အလက်တွေကိုလည်း အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ အသွင်အပြင်က ဘယ်လိုပုံစံရှိနေမလဲ၊ သူများနဲ့ပဲ တူနေမလား၊ အလုပ်ခွင်ထဲမှာ သူများနဲ့မတူတဲ့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုတွေ ဘာတွေရှိနေသလဲ၊ ဒါတွေကို တစ်ခြားသူတွေသိလာအောင် လုပ်ဆောင်ပါ။
နောက်ပြီး စတိုင် ဖြစ်ပါတယ်၊ စတိုင်ဆိုတာအဝတ်အစားပုံစံ ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ အလုပ်လုပ်ရင် ကိုယ်ရဲ့ စတိုင်က တိကျတာပဲ၊ အချိန်ကိုက်ပြီးအောင်လုပ်နိုင်တယ်၊ ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့ အရာတိုင်းက ပြန်လှည့် ကြည့်စရာမလိုဘူး၊ ဒါမျိုးကိုဆိုလိုတာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ ပင်ကိုယ်စတိုင်တစ်ခုရှိနေမှ ဖြစ်မှာပါ။ ဒီအချက်ရှိနေတယ် ဆိုရင်တော့ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု ကို မလွဲမသွေရှိလာမှာပါ။ ဒါကလည်း ကြော်ငြာခြင်းအတွက် အရေးအကြီးဆုံး အချက်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်ပြီးတော့ ဝန်ဆောင်မှုအပိုင်းပါ။ ဝန်ဆောင်မှုလို့သတ်မှတ်ရင် ကိုယ်အတွက်ရော သူများအတွက်ပါ အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့ လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်တိုင်းဟာ ကိုယ့်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သလို၊ သူများအတွက်လည်း ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အလိုက်သိတက်တာ၊ သည်းခံတက်တာ၊ အားနာတာ၊ စိတ်ဆိုး ဒေါသထွက်တာ တွေကိုလည်း သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ မိတ်ဆွေက ဝန်ဆောင်မှုဘယ်လောက် ကောင်းတယ်ဆိုတာက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေက ဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးတင်ပြချင်တာက ကြော်ငြာတော့မယ်ဆိုရင် နာမည်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ လူစိတ်ဝင်စားဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါက ဘယ်အရာမဆို အရေးအကြီးဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေက တအားနာမည်ကြီးနေသူ တစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ လူတိုင်းက ကိုယ့်နာမည်ကိုမှတ်မိနိုင်ပေမဲ့၊ ဒီအခြေအနေအဆင့် မရောက်သေးရင် တော့ ဒါကလည်း အရေးပါတဲ့အချက်ပါ။
ဒီအချက်အလက်တွေကတော့ကြော်ငြာကောင်းတဲ့ သူတွေမှာ တွေ့ရတက်တာမို့ ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားကြည့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ။
Posted by Alex Aung at 5:03 AM No comments:
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ အိမ်ထောင်ကျသွားလို့ရှိရင် စိတ်ပူရတဲ့ ပြဿနာတွေထဲက တစ်ခုကတော့ ယောက္ခမနဲ့ အဆင်ပြေပ့ါမလား ဆိုတာပါပဲ။ တကယ်လည်း အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသမီးတွေမှာ အဲဒါက တော်တော်လေး ပြဿနာ ဖြစ်နေတာကို သတိထားမိတယ်။ ဒါ ပြောရရင် အစဉ်အလာတစ်ခုလိုပါပဲ။ သမီးယောက္ခမ မတည့်ကြဘူး ဆိုတာ ဆန်းတဲ့ကိစ္စမှ မဟုတ်တာ။ ယောက္ခထီးနဲ့ သမက် မတည့်တာထက် ယောက္ခမနဲ့ ချွေးမ မတည့်တာကတော့ ပိုပြီးတော့မှ များတယ်။ ဒါ တရားသေ သတ်မှတ်ပြီး သိမ်းကြုံးပြောတာ မဟုတ်သလို၊ သုတေသန စစ်တမ်းတစ်ရပ် လုပ်ပြီး တွေ့ရှိထားတာတော့လည်း မဟုတ်ဘူး။ ချွေးမနဲ့ ယောက္ခမက သားအမိတွေလိုဖြစ်ပြီး ယောက္ခထီးနဲ့ သမက်နဲ့က အဆင်မပြေ ဖြစ်နေကြတာတွေလည်း ပုံလို့။ သို့သော်လည်း ရာခိုင်နှုန်း အနည်းနဲ့အများတော့ ကွာလိမ့်မယ်လို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မြင်မိသလောက်နဲ့ ချိန်ထိုးပြီး ယူဆရတယ်ပေါ့။
ဒါက ရုတ်တရက်ဆို မိန်းကလေးတွေရဲ့ ပြဿနာ ဆိုပေမဲ့လည်း ကျွန်တော်တို့ အမျိုးသားတွေကိုလည်း ပြဿနာ လာပေးတယ်။ ဘာလို့ဆိုတော့ ယောက္ခမ ဆိုတာက ကိုယ့်ကို မွေးထုတ်ထားတဲ့ အမေဖြစ်ပြီး၊ ချွေးမဆိုတာက ကိုယ်ချစ်လို့ ယူထားတဲ့ မိန်းမ ဖြစ်နေတာကိုး။ ဒီတော့ ကြားညှပ်တာပေါ့။ တချို့ကျတော့လည်း ပြောတယ်၊ သားကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်ရင် မိန်းမအတွက် လင်ယောကျာ်းကောင်း မဖြစ်နိုင်သလို၊ လင်ယောကျာ်းကောင်း ဖြစ်ချင်ရင်လည်း အမေ့အတွက်ကတော့ သားကောင်းတစ်ယောက် မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့။ တကယ်လည်း အဲဒီနှစ်ခုကြား ဟန်ချက်ညီအောင် လုပ်ဖို့ဆိုတာ သိပ်ခက်တယ်။ ပြောသလောက် မလွယ်ဘူး။
ကျွန်တော်ကတော့ အိမ်ထောင်သည် မဟုတ်ဘူး။ (ကြုံတုန်း ကြော်ငြာဝင်တာ) ပြောရရင် အဲဒီလို ကြားညှပ်တာမျိုးကို တွေးပြီး စိတ်ညစ်နေမိသူ။ နှစ်ဖက်လုံးကိုလည်း စိတ်ချမ်းသာအောင် ထားချင်တယ်။ အဲဒါက ဖြစ်ရော ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားလည်း စိတ်ပူမိတယ်။
တစ်ခါက လူငယ်တွေနဲ့ Healthy relationship အကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲလုပ်တော့ ပြောဖြစ်ကြတဲ့အထဲ အဲဒီကိစ္စလေးက ပါလာတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ရုံးက ဆရာတစ်ယောက်က အိမ်ထောင်သည်။ နောက်ပြီး သူက သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ မိသားစုကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူမှန်း ဖေ့စ်ဘွတ်ပိုိ့စ်တွေကတဆင့် တော်တော်များများက သိနေကြတယ်။ အဲဒါနဲ့ သူ့ကို အတွေ့အကြုံ ဝေမျှခိုင်းတော့ ဥပမာလေးတစ်ခု သူပြောသွားတယ်။ ဒါလေးက အမျိုးသားတွေ၊ နောက်ပြီး အိမ်ထောင်သည်တွေ သိထားသင့်တာမို့ တစ်ဆင့်ဖောက်သည်ပြန်ချချင်ပါတယ်။
တစ်ခါတုန်းက သူ နယ်မြို့တစ်ခုကို ခရီးထွက်ရတော့ ပြန်လာတဲ့အခါ အဲဒီမြို့ရဲ့ နာမည်ကျော် သနပ်ခါးတုံးလက်ဆောင်တွေ ၀ယ်လာပါတယ်တဲ့။ အမေ့အတွက် ၁ တုံး။ မိန်းမအတွက် ၁ တုံး။ ဒါပေမဲ့ သူက တမင် ၃ တုံး ၀ယ်ခဲ့တယ်။
အဲ့လိုနဲ့ အိမ်ပြန်ရောက်၊ အထုပ်တွေချ။ ပစ္စည်းတွေရှင်းတော့ သူက သနပ်ခါးတုံး ၁ တုံးကို ဖွက်ထားလိုက်ပြီး ၂ တုံးကိုပဲ မိန်းမဆီ ယူသွားတယ်။ ပြီးတော့ မေးတယ်။ “မိန်းမ ဒီမှာ ငါ သနပ်ခါးတုံးတွေ ၀ယ်လာတယ်၊ မင်း ၁ တုံး၊ အမေ့အတွက် ၁ တုံးပေါ့။ အဲဒါ မင်း ဘယ်အတုံးယူမလဲ၊ အရင်ရွေးလိုက်၊ ပြီးမှ ကျန်တာကို အမေ့ကို သွားပေးလိုက်မယ်” တဲ့။ အဲဒါနဲ့ မိန်းမကလည်း သူ့ကို ဦးစားပေးတယ် ဆိုပြီး ပျော်သွားရော။ ပျော်သွားတဲ့အခါ၊ လင်ယောကျာ်းက သူ့ကို ဦးစားပေးတယ်လို့ ခံစားရတဲ့အခါ သူ့ဘက်ကလည်း နားလည်ပေးတဲ့အနေနဲ့ သိပ်မကောင်းဘူးလို့ သူထင်တဲ့ အတုံးကို ရွေးပြီး အမေ့ကို ပိုကောင်းတဲ့အတုံး ပေးလိုက်တယ်ပေါ့။
အဲဒီ ၁ တုံးကို သူက ပြန်ယူခဲ့။ ပြီးမှ ဖွက်ထားတဲ့ အတုံးကို ပြန်ထုတ်။ ၂ တုံးပေါင်းပြီး အမေ့ဆီသွား။ “အမေ သား ဒီမှာ အမေတို့အတွက် သနပ်ခါးတုံးတွေ ၀ယ်လာခဲ့တယ်။ အဲဒါ အမေ အရင်ရွေး၊ ပြီးမှ ကျွန်တော့်မိန်းမကို ပေးလိုက်မယ်” ဆိုတော့ အမေကလည်း ပျော်သွားပြန်ရော။ ဟာ ငါ့သားလေးက အမေ့ကို သိတတ်တယ် ဆိုပြီး သူကလည်း ချွေးမကို ဦးစားပြန်ပေးတဲ့အနေနဲ့ သိပ်မကောင်းဘူး ထင်တဲ့ အတုံးကို ယူလိုက်တာပေါ့။
တကယ်တော့ သနပ်ခါးတုံးတွေကို သေချာရွေးဝယ်လာပြီးသား ဆိုတော့လည်း ကောင်းတာ၊ မကောင်းတာ သိပ်မကွာပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှုလေး ရသွားတာပေါ့။ နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ စိတ်ထဲမှာ သူတို့ကို ဦးစားပေးတယ် လို့ ထင်သွားတာကိုး။ ယောက္ခမနဲ့ ချွေးမကြားလည်း အဆင်မပြေ မဖြစ်တော့ဘူး။ အဲ့လိုခံစားချက်မျိုးတွေ ၀င်သွားတဲ့အခါ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ပိုပြီး အကောင်းမြင်လာတယ်။ အသေးအဖွဲလေးတွေကို အထအန ကောက်တာမျိုး မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။
ဒါက အခါခပ်သိမ်း လုပ်လို့ မရပါဘူး။ လူတိုင်း၊ မိသားစုတိုင်းနဲ့လည်း အဆင်ပြေချင်မှ ပြေလိမ့်မယ်။ အဲဒီအတွေ့အကြုံလေးကို ဝေမျှရင်း သူ ဆက်ပြောသွားတာလေး သိပ်လှတယ်။ ကျွန်တော် ဒီလိုလေး လုပ်လို့ရတယ် ဆိုတာ အမေကလည်း နင့်မိန်းမကို မပေးနဲ့ ငါ့ပဲ ၂ တုံးစလုံး ပေး ဆိုတာမျိုး၊ မိန်းမကလည်း ရှင့်အမေကို မပေးနေနဲ့၊ ကျွန်မပဲ ၂ တုံးစလုံး ယူလိုက်မယ် ဆိုတာမျိုး မဖြစ်ကြဖို့၊ သိပ်အတ္တမကြီးကြဖို့တော့ လိုတာပေါ့တဲ့။ သဘောတရားက တစ်ဖက်ဖက်က အလွန်အကျွံ ဖြစ်နေပြန်ရင်လည်း ဘယ်လိုမှ ညှိနှိုင်းလို့ မရဘဲ အဲဒီအိမ်ထောင်ရေးဟာ အဆင်မပြေ ဖြစ်ဖို့ များတယ်။ အဲ့လောက်ထိ ဟုတ်မနေဘူးဆိုရင်တော့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဦးစားပေးခံချင်တဲ့ စိတ်သဘောကို နားလည်ပြီး ဆက်ဆံတတ်ရင် ပိုပြီး အဆင်ပြေနိုင်တယ် ဆိုတာလေးကို ဝေမျှချင်တာပါ။
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား နာမည်လိုပါပဲ။ တကယ်တော့ ယောက္ခမဆိုတာ တစ်ခါတုန်းက ချွေးမပါ။ ခုကိုယ့်ချွေးမမှာ ရှိနေတဲ့ ခံစားချက်လေးတွေက ကိုယ်တိုင် ချွေးမ ဘ၀တုန်းကလည်း အနည်းနဲ့အများ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါကို နားလည်ကြည့်ပေးပါ။ အဲ့လိုပဲ၊ ချွေးမအနေနဲ့လည်း တစ်သက်လုံး ချွေးမပဲ ဖြစ်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်နေ့ကျ ကိုယ်လည်း ယောက္ခမ ဖြစ်လာဦးမှာပါ။ ခု ကိုယ့်ယောက္ခမမှာ ရှိနေတဲ့ ခံစားချက်မျိုးတွေဟာ တစ်ချိန် ကိုယ့်မှာလည်း ရှိလာမှာပါ။ ဒီလိုလေး အပြန်အလှန် နားလည်ပေးနိုင်မယ် ဆိုရင်တော့ ပိုပြီး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုတွေ ဖြစ်နေမှာ အသေအချာပါပဲ။
အမျိုးသားတွေအနေနဲ့လည်း အမေ့ကိုလည်း ချစ်ပါ။ မိန်းမကိုလည်း ချစ်ပါ။ တစ်ဖက်ဖက်ကိုပဲ အလွန်အကျွံ အရေးပေးတာမျိုး မလုပ်ဘဲ ဟန်ချက်ညီညီလေး နေပါ။ နောက်ပြီး အဲ့လိုမျိုး ပြဿနာတွေ ကြုံနေရတယ် ဆိုလည်း သူတို့ကို အပြန်အလှန် နားလည်မှုထားဖို့ပဲ နားချမနေပါနဲ့။ ဆဒ္ဒန်ဆင်မင်းကို စူဠသုဘဒ္ဒါ စိတ်ဆိုးသွားရခြင်းမှာ ဘယ်လောက် အသေးအဖွဲပဲဆိုဆို အကြောင်းအရင်းတွေတော့ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒါကို မြင်အောင်ကြည့်ကြည့်ပါ။
ကိုယ့်ကို မွေးထားတဲ့ အမေနဲ့ ချစ်လို့လက်ထပ်ထားတဲ့ မိန်းမ အဆင်မပြေကြရင် ကိုယ်တွေက ကြားညှပ်နိုင်တယ် ဆိုပေမဲ့ တစ်ဖက်က ပြန်စဉ်းစားရင်လည်း ကိုယ်ကသာ လိမ္မာပါးနပ်စွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတတ်ရင် သူတို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးက ပိုလို့တောင် အဆင်ပြေလာနိုင်သေးတယ် ဆိုတာကို သိစေချင်ပါတယ်။
ဒါကပဲ ခေတ်သစ် အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသားတို့ရဲ့ ပါဝါလို့ ဆိုချင်ဆိုပါတော့။
(ဒီလိုပြဿနာ ကြုံနေရတဲ့ အိမ်ထောင်သည်တွေအတွက်ရော၊ အိမ်ထောင်မရှိသေးပေမဲ့ ဒါကို တွေးပူနေတဲ့ ညီအစ်ကိုတွေအတွက်ရော ဝေမျှပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကြားဖူးတဲ့၊ အသုံးပြုဖူးတဲ့ ယောကျာ်းတို့၏ မာယာတွေ ရှိရင်လည်း ကွန်မန့်မှာ ရေးသွားပေးစေချင်ပါတယ်။ FA ညီအစ်ကိုတွေ FA ဘ၀ကများ မတော်တဆ ကျွတ်သွားခဲ့ရင် အဆင်သင့် ဖြစ်နေအောင်လို့ပါ။)
Posted by Alex Aung at 5:39 AM No comments:
၂၁ ရာစုရဲ့ နာမည်အကြီးဆုံး နဲ့အထူးဆန်းဆုံး ဝိတ်ချနည်းအသစ် (သို့) Ketogenic Diet
မြန်မာတွေအားကျရတဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ အရှေ့အာရှနိုင်ငံက အလှအပစံနှုန်းတွေဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်သွယ်သွယ်လျလျဖြူလွလွလေးတွေပါ။ ကျစ်လစ်သန်မာတောင့်တင်းတဲ့ ခန့်ခန့်ငြားငြား ယောက်ျားပီသတဲ့ ခန္တာကိုယ်တွေပါ။ ဒါတွေဟာ တစ်ရေးနိုး ထမေးရင်တောင် မပြောင်းလဲတဲ့ အပြင်းထန်ဆုံး ဆန္ဒတွေပါ။
အဲ့ဒီလို ခန္တာကိုယ်လှလှလေးတွေကို လူတိုင်း အားကျကြတယ်။ အဲ့ဒီလို ပိန်ချင်ကြတယ်။ သွယ်ချင်ကြတယ်။ အဆီပိုတစ်စက်မှ မရှိတဲ့ ခန္တာကိုယ်လေးနဲ့ ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိချင်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြသာနာက တစ်ဖက်မှာလည်း ကိုယ့်ပါးစပ်၊ကိုယ့်ခံတွင်းက တောင့်တသမျှ အစားအသောက်မှန်သမျှကို လုံးဝမလျှော့ချင်တာပါပဲ။
စိတ်အလိုလိုက်ချင်တယ်။ ပိန်ချင်လှချင်ပေမယ့် ဗိုက်ဆာတာအရင်ဖြစ်လာတဲ့အခါ အရသာရှိပေ့ဆိုတဲ့ ဆီဦးထောပတ်အဆီတစ်ထပ်၊အသားတစ်ထပ်တွေဟာ ဖျက်ရခက်ခက်နဲ့ ဇွတ်ရှေ့တိုးစားမိတဲ့ စားကောင်းသောက်ဖွယ်တွေပါ။
ဒါပေမယ့် ၂၀၁၈ မှာ ကမ္ဘာနဲ့အဝှမ်း ခေတ်အစားဆုံးနဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံး ၊ Google ရဲ့ Search List မှာတောင် အရှာဖွေခံရဆုံးဖြစ်လာခဲ့တဲ့ Keto Diet ကတော့ တစ်သက်လုံးအရိုးထဲစွဲလာခဲ့တဲ့ ဝိတ်ချနည်းတွေ၊ အဆီကျနည်းတွေကို မြေလှန်လိုက်ပါတော့တယ်။
Keto တဲ့။ စကားလုံးလေးတစ်လုံးတည်းနဲ့ အနှစ်နှစ်အလလက လူတိုင်း ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ ဝိတ်ချနည်းဆိုင်ရာ စားသောက်နေထိုင်မှုပုံစံတွေကို ပြောင်းပြန်လှန်ပစ်လိုက်တဲ့ ဒီစကားလုံးလေးက ခုချိန်မှာတော့ နာမည်အကြီးဆုံးနဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံး အားအထားရဆုံး အဆီချနည်းတစ်ရပ်ဖြစ်လာပါပြီ။
ဆိုတော့ကာ Keto ဆိုတာ ဘာပါလဲ?
တကယ်တော့ Keto ဆိုတာ ကာဘိုဟိုက်ဒြိတ်ဓါတ်တွေကို လျှော့ချပြီး အဆီကိုအဆီနဲ့ တိုက်ဖျက်တဲ့ Low Carb,High Fat Diet Plan တစ်မျိုးပါ။ အဆီကို အဆီနဲ့တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ ဒီ ထူးဆန်းချက်ကိုက Keto Diet ရဲ့ အသက်ပါပဲ။
Keto ရဲ့ နာမည်အရှည်ကောက်ကတော့ Ketogenic Diet ဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်ပြောရရင် ခန္ဓာကိုယ်ထဲက လောင်စာသဖွယ် မော်လီကျူးလေးတွေဖြစ်တဲ့ "Ketones" ဆိုတဲ့ မော်လီကျူးလေးတွေကို ထုတ်ပေးတဲ့ Diet တစ်မျိုးပါ။ Ketone Molecules လေးတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအတွင်းမှာရှိတဲ့ Glucose သကြားဓါတ်လေးတွေ ပြတ်တောက်မှုဖြစ်တဲ့အခါမှာ ထွက်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။
Ketones တွေ ဘယ်နေရာကထွက်ပါသလဲ? အမှန်တော့ အသည်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ဝင်ရောက်လာတဲ့ အဆီတွေကနေ Kotones တွေ ထုတ်လွှတ်ပေးပါတယ်။ အဲ့ဒီ Ketones တွေဟာ နောက်ပိုင်းမှာ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာအသီးသီးဆောင်ရွက်ဖို့ အထူးသဖြင့် ဦးနှောက်အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုလုံးအတွက် လောင်စာအနေနဲ့ မောင်းနှင်ပါတယ်။
Keto Diet စတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဟာ ဝင်ရောက်လာတဲ့ စားသမျှလောင်စာမှန်သမျှကို အဆီချေဖျက်ဖို့တစ်ခုပဲ အားစိုက်လိုက်တာမို့ အဆီချေဖျက်နှုန်းဟာ ၂၄ နာရီ ၇ရက် တစ်ပတ်လုံး ဆက်တိုက်လောင်ကျွမ်းပါတော့တယ်။ သွေးတွင်းမှာရှိတဲ့ သကြားဓါတ် Insulin Level နိမ့်လာတဲ့အခါ ချေဖျက်နှုန်းဟာ တရစပ်ပိုအားကောင်းလာတာမို့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်သမျှ အဆီတွေက လောင်ကျွမ်းဖို့စီပဲ ဦးတည်ပါတော့တယ်။
အဆီလောင်ကျွမ်းလေလေ Weight ကျလေလေ ဖြစ်လာပြီး တခြားသိသိသာသာတိုးတက်လာတဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကတော့ အဆာခံနိုင်လာတာရယ်၊ ခန္ဓာကိုယ်က လိုအပ်တဲ့စွမ်းအင်တွေ ပုံမှန်ရရှိလာတာကြောင့် အမြဲတမ်း တက်ကြွလန်းဆန်းနေတတ်ပြီး အာရုံစူးစိုက်မှုနဲ့ ဦးနှောက်မှတ်ဉာဏ်အား ကောင်းမွန်လာပါတယ်။ ဒါက Keto ရဲ့ အသိသာဆုံး အကျိုးကျေးဇူးတွေပါပဲ။
ဒါဆို Ketogenic ဖြစ်ဖို့ အဓိက လိုအပ်တဲ့ Ketones တွေထွက်အောင် ဘယ်အစားအစာတွေကို အဓိက စားရမလဲ?
Ketones နဲ့ Carb ဆိုတဲ့ Carbohydrate ဆိုတာ ရန်သူလိုပါပဲ။ Carbs နည်းနိုင်သမျှ နည်းနည်းစားလေလေ ဦးနှောက်အခန်းကဏ္ဍအတွက် အထူးကောင်းတဲ့ Ketones တွေ များများထွက်လေလေပါပဲ။
ခန္တာကိုယ်အတွက် အဓိက လိုအပ်တဲ့ အာဟာရကြီး ၃ မျိုးက Carbohydrate ၊ Protein နဲ့ Fat ဆိုတဲ့ အဆီဓါတ်ပါပဲ။ ဒါဆို နားလည်အလွယ်ဆုံးပြောရရင် အဆီဓါတ်ကနေ Ketones တွေများများထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ အဆီဓါတ်ကို များများစားသုံး၊ Carbohydrate ဓါတ် လုံးဝလျှော့ချပြီး သင့်တင့်မျှတတဲ့ အာဟာရအတွက် Protein ဓါတ် အလုံအလောက်မှီဝဲနိုင်ရင် Ketogenic Diet ဖြစ်ပါပြီ။
ဒီအဆိုအရ Carb ခေါ်တဲ့ Carbohydrate ဓါတ်က ခန္ဓာကိုယ်အတွက်၊ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်တဲ့လူနေမှုအတွက် ဘာလို့ ဆိုးကျိုးတွေ ရှိနေတာလဲဆိုတာ သိဖို့လည်း လိုလာပါပြီ။ Carb ဆိုတာကတော့ ကိုယ်နေ့စဉ်စားနေကျ ဆန်၊ဂျုံ၊ပြောင်း နဲ့လုပ်တဲ့အစားအစာတွေ၊ အမျှင်တွေ၊ အသီးအနှံတွေ၊ ဖျော်ရည်အအေးတွေ၊ Junk Food တွေကထုတ်ပေးတဲ့ သကြား၊ ကစီဓါတ်နဲ့ အမျှင်ဓါတ်တွေပါပဲ။ အဲ့ဒီ အစားအစာတွေကရတဲ့ Carbohydrate ဓါတ်တွေဟာ ခန္တာကိုယ်ထဲ ရောက်ပြီးပြိုကွဲသွားတဲ့အချိန် Glucose ဆိုတဲ့ သွေးတွင်းအချိုဓါတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
အဲ့ဒါမို့ Keto Diet က ဘာလဲဆိုတာ အလွယ်ရှင်းပြရရင် သကြားလျှော့ချပြီး အဆီကိုအဆီနဲ့ ချမယ့် အထူးအဆန်း ကျန်းမာရေးနည်းလမ်းသစ်ပေါ့။ ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာက ကျန်းမာရုံမကဘဲ ကိုယ်အလေးချိန်သိသိသာသာကျပြီး ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ လှုပ်ရှားမှု၊ လုပ်ဆောင်ချက်တွေပါ သိသိသာသာကောင်းမွန်လာတာမျိုးပါ။
Ketogenic Diet စဖို့ လုံလောက်တဲ့ဗဟုသုတရှိပြီဆိုရင်တော့ ဘယ်အရာတွေကို တစိုက်မတ်မတ်စားသုံးပြီး ဘယ်အရာတွေကို ရှောင်ရှားရမယ် ဆိုတဲ့ အစားအသောက်စားသုံးပုံနည်းလမ်းကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။
Ketosis ဖြစ်ဖို့ Ketones Molecules လေးတွေ ထုတ်လွှတ်ပေးဖို့ စားသုံးသင့်တဲ့အစားအစာတွေကိုမြင်ရင် ထူးဆန်းနေမှာ၊ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားလို့ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်မိစေမှာ အမှန်ပါ။
Unprocessed Meat တွေဖြစ်တဲ့ ကြက်၊ဝက်သား၊ သုံးထပ်သားတွေ၊ သိုးသား၊ အမဲသား၊ ဆိတ်သား၊ Bacon တွေ အထူးသဖြင့် မြက်စားတဲ့သတ္တဝါတွေဟာ Keto နဲ့အကိုက်ညီဆုံး Carb လျှော့ချနိုင်ဆုံး အသားတွေပါ။
သတိထားရမှာက အဲ့ဒီအသားတွေဟာ ပရိုတင်းဓါတ်လည်း ကြွယ်ကြွယ်ဝဝပါနေတာမို့ လိုအပ်တဲ့ ပရိုတင်းဓါတ်ထက်များသွားရင်လည်း Glucose အဖြစ်ပြောင်းကာ Ketosis ဖြစ်ဖို့ ခက်သွားနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါမို့ ပရိုတင်းဓါတ်နည်းနည်းနဲ့ အဆီရဖို့အတွက် အသားကို သင့်တော်ရုံပဲစားဖို့လိုပါတယ်။
Processed Meat တွေဖြစ်တဲ့ Sausage ကြက်အူချောင်း၊ဝက်အူချောင်းတွေ၊ အသားလုံးတွေ၊ Cold Cuts တွေကတော့ Carb ပါတတ်လို့ ရှောင်ရပါမယ်။
ငါးတွေနဲ့ ပင်လယ်စာတွေကတော့ Keto အတွက် အားလုံးသင့်တော်ပါတယ်။ အဆီများတဲ့ Salmon တို့လိုငါးမျိုးဆို ပိုတောင်ကောင်းပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် တန်ပူရာလို ဂျုံနဲ့ နှစ်ကြော်စားတာတို့ ဆီနဲ့ကြော်ချက်တာတို့တော့ လုံးဝမကိုက်ညီပါဘူးနော်။
ပြုတ်ပြုတ်၊ ထောပတ်နဲ့ကြော်ကြော်၊ အနှစ်ကျက်စားမလား၊ ကြက်ဥမွှေကြော် Omelet လုပ်စားမလား အကုန်အဆင်ပြေတာကတော့ ကြက်ဥပါ။ ခြံထွက်ကြက်ဥတွေဆို ပိုကျန်းမာစေပါတယ်။ တစ်ရက်ကို ၃၆ လုံးအထိ စားလို့ရပါတယ်။
Keto Diet ရဲ့ အဓိက ကယ်လိုရီတွေက အဆီဓါတ်ကနေ ယူရမှာမို့ ကိုယ်စားသုံးတဲ့အသားငါးတွေကနေ မကဘဲ ဟင်းချက်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ ထောပတ်၊ အုန်းဆီ၊ သံလွင်ဆီတွေနဲ့ ချက်ပြုတ်နိုင်ပါတယ်။ Sauce တွေထဲမှာတော့ Chili Sauce တွေ၊ Tomato Sauce တွေ လုံးဝ ရှောင်ရပါမယ်။ အဲ့အစား Bearnaise လို့ခေါ်တဲ့ ထောပတ်နဲ့ကြက်ဥအဓိကသုံးပြီးစပ်ရတဲ့ Sauce နဲ့ တခြားအဆီများတဲ့ Garlic Butter Sauce တွေကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
မြေလွှာအထက် သီးပွင့်တဲ့ အသီးရွက်တွေ အထူးသဖြင့် စိမ်းစိုတဲ့ အသီးအရွက်တွေကို စားသုံးရမှာပါ။ ထောပတ်သီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ပန်းဂေါ်ဖီ၊ ကိုက်လန်၊ ဆလပ်ရွက်၊ ထိုင်ဝမ်မုန်ညင်း၊ သခွားသီး၊ ခရမ်းသီးတို့ကတော့ အကောင်းဆုံးတွေပါပဲ။
မြေကြီးအောက်က သစ်ဥသစ်ဖုတွေဖြစ်တဲ့ မြေပဲ၊ ကန်စွန်းဥ၊ အာလူး တို့ကို စားလို့မရပါဘူး။
အသီးအနှံတွေကို ဒီတိုင်းစားတာထက် အဆီပိုများများဖြစ်စေမယ့် ထောပတ်နဲ့ကြော်တာမျိုး၊ သံလွင်ဆီများများထည့်ကြော်တာမျိုးတွေဟာ Keto Dieter များအတွက် အဆီတွေကိုပါအသီးအနှံတွေကနေတဆင့် ခန္ဓာကိုယ်ထဲပို့ရာရောက်တာမို့ ပိုကောင်းပါတယ်။
ထောပတ် ဆို Keto အတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ အဆီပိုများတဲ့ Cheese ခဲကြီးတွေ၊ အဆီများများပါတဲ့ ဒိန်ချဉ်တွေဆို ပိုတောင်ကောင်းပါသေးတယ်။ Heavy Cream တွေဆို ဟင်းချက်ရင် သုံးကိုသုံးသင့်ပါတယ်။
သတိကြီးကြီးထားရမှာက နွားနို့ပါ။ နွားနို့တစ်ခွက်ကို Carbs 15 Gram လောက်ပါတတ်တာမို့ ကော်ဖီထဲ မပါစလောက်ထည့်သောက်တာမျိုးကလွဲရင် နွားနို့ကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။ Latte Coffee တွေ၊ သကြားပိုထည့်ထားတဲ့ Low Fat ဆိုတဲ့ဒိန်ချဉ်တွေ ရှောင်ရပါမယ်။
Cheese စားတိုင်းကောင်းတယ်ဆိုပေမယ့် Cheese ပါတဲ့ Snack တွေကတော့ Keto နဲ့ လုံးဝမကိုက်ပါဘူးနော်။ Snack တွေအကုန်လည်း ရှောင်ရပါမယ်။ အာလူးကြော်၊မုန့်ကြွပ်နဲ့ တခြား Shopping Centre မှာတင်ထားသမျှ Snack Counter က မုန့်တွေဟာ ရန်သူပါပဲ။
နည်းနည်းလေးစားရုံလောက်က အဆင်ပြေပေမယ့် အစေ့အဆံတော်တော်များများက စားရင်း လက်ကမချနိုင်တဲ့ထိ ပိုပိုဆွဲဆောင်နိုင်လို့ များသွားရင်လည်း Carbs အဖြစ်ကူးပြောင်းသွားတာ သတိချပ်ပါ။ သီဟိုရ်စေ့ ဟာ Carb လည်း များလို့ မစားသင့်ပါဘူး။
စတော်ဘယ်ရီနဲ့ တခြား ဘယ်ရီသီးတွေကို အသင့်တင့်စားလို့ရသလို အဆီပိုများတဲ့ Whipping Cream နဲ့လည်း အချိုပွဲအဖြစ်စားလို့ရပါတယ်။
ရေ-ရိုးရိုးဖြစ်ဖြစ်၊ ရေခဲရေဖြစ်ဖြစ် ရပါတယ်။ ပိုထိရောက်ချင်ရင်တော့ သခွားသီး၊ လီမွန်၊ သံပုရာကွင်းလေးတွေ လှီးထည့်ပြီးသောက်ပါ။ Keto ကြောင့် အဖျားဝင်လာတာနေထိုင်မကောင်းလာတာမျိုးဆို ရေထဲ ဆားနည်းနည်းထည့်သောက်ပါ။
Coffee- သကြားလုံးဝမထည့်ဘဲ နို့ပါတယ်ဆိုရုံလောက်နဲ့ သောက်နိုင်ရင်သောက်ပါ။ သဘာဝအတိုင်း Black Coffee လည်း ရပါတယ်။ အဆီပိုများများဝင်ပြီး ပိုထိရောက်ဖို့ဆို ထောပတ်နဲ့အုန်းဆီများများပါတဲ့ "Bulletproof Coffee" ဆိုတဲ့ ကျည်ကာကော်ဖီ သောက်ပါ။
Tea- Green Tea ၊ Black Tea ၊ Mint ၊ Herbal ကြိုက်တာသောက်လို့ရပါတယ်။ သကြားမပါဘဲပေါ့။
အရိုးပြုတ်ရည်- အာဟာရတွေ အပြည့်ဝပါတဲ့ အရိုးပြုတ်ရည်တွေကိုလည်း သောက်လို့ရပါတယ်။ ပိုကောင်းချင်ရင် ထောပတ်ထည့်မွှေပြီးသောက်ပါ။
Alcohol- သကြားမပါတဲ့ Dry Wine မျိုး Wine အဖြူရော၊ အနီရော၊ Champagne ၊ Whisky ၊ Vodka ၊ Cocktails အကုန် သကြားမပါရင် သောက်လို့ရပါတယ်။
Cocoa 70% နဲ့အထက်ပါတဲ့ Dark Chocolate မျိုး စားလို့ရပါတယ်။
Keto သမားတွေအတွက် အန္တရာယ် High Carb အစားအစာတွေကတော့-
သကြား- Weight ချရာမှာရော ကျန်းမာတဲ့လူနေမှုအတွက်ရော မဟာ့ မဟာ ရန်သူတော်ကြီးပါ။ သကြားပါတဲ့အအေးမှန်သမျှ၊ အစားအစာမှန်သမျှ၊ သကြားနည်းနည်းလေးတောင်ပါတဲ့အစားအစာမျိုးကအစ အကုန်ဖြတ်တောက်ရမှာပါ။ Sauce တွေ၊ ပျားရည်တွေကအစ သကြားပါပါတယ်။ လုံးဝ ရှောင်သင့်တဲ့အရာတွေပါပဲ။
ကစီဓါတ်- ပေါင်မုန့်၊ ခေါက်ဆွဲ၊ ဂျုံနဲ့လုပ်တဲ့ မုန့်မှန်သမျှ၊ ထမင်း၊ အာလူး၊ ကန်စွန်းဥ၊ အာလူးနဲ့လုပ်တဲ့ Fast Food မှန်သမျှ၊ ဆန်ပြုတ် စတာတွေရှောင်ရပါမယ်။ ပဲနဲ့လုပ်တာတွေလည်း ရှောင်ရပါမယ်။
ပေါင်မုန့်၊ ဆန်မစားရမနေနိုင်တဲ့သူတွေအတွက် ခုဆို Keto ပေါင်မုန့်နဲ့၊ Keto ဆန်တွေ ရောင်းလာကြပါပြီ။
ဘီယာနဲ့ သစ်သီးမှန်သမျှ သကြားပါဝင်နိုင်ချေရှိတဲ့ သစ်သီးအကုန် ရှောင်ရပါမယ်။ Margarine ကိုလည်း ရှောင်ရပါမယ်။
စားတိုင်း စားတိုင်း ဘာစားစား သတိအမြဲဝင်နေရမှာက အဆီစားလေလေ Keto အတွက် ကောင်းလေလေ ဆိုတာပါပဲ။ သကြားဟာရန်သူ၊ အဆီမှ Ketosis လို့ မှတ်ထားရင်ရပါပြီ။
Keto လုပ်ခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေ ရှိလာနိုင်လား?
ဆိုးကျိုးရယ်လို့ လုံးဝ မရှိပေမယ့် Keto Flu လို့ခေါ်တဲ့ Keto ကိုက် ဝိသေသလက္ခဏာတွေကိုတော့ ဖြတ်သန်းရပါမယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့ ခေါင်းကိုက်တာ၊ ပင်ပန်းနုံးချိတာ၊ မအီမသာဖြစ်လာတာ၊ ခံတွင်းအနံ့နံလာတာနဲ့ ရေဆာလွယ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Ketosis အခြေအနေရောက်သွားတဲ့အခါ အကုန်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။
Ketogenic Diet အဖြစ် ထဲထဲဝင်ဝင် စနစ်တကျ စားသုံးပြီး Ketosis တစ်ယောက်အဖြစ် ရောက်ဖို့ကတော့ ကိုယ်လျှော့ချတဲ့ Carb နဲ့ စားသုံးတဲ့ အဆီဓါတ်ပေါ်မူတည်ပြီး ၂ရက်-၄ရက်ကနေ တစ်ပတ်ထိ ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ကိုယ်အလေးချိန် သိသိသာသာကျဆင်းလာတာတွေ ၊ ဦးနှောက်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတိုးတက်လာတာတွေ၊ နေရထိုင်ရကောင်းမွန်လာတာတွေ သိသိသာသာခံစားလာရတော့မှာပါ။
Keto Diet ရဲ့ ကျန်းမာရေး ကောင်းကျိုးတွေကရော?
ပြောရင် အံ့သြကုန်နိုင်ဖွယ်ပါပဲ။ Weight ချဖို့ အဓိက လို့ ထင်နေနိုင်တဲ့ Ketogenic Diet ကနေ တခြားထင်မထားတဲ့ ကျန်းမာရေးဆုလာဘ်ကြီးတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသေးတယ်။
ပထမအချက်က စားချင်စိတ် လုံးဝ လျော့ကျသွားတာပါပဲ။ နောက် လေ့လာမှုတွေအရ Keto စပြီးပြီးချင်း တဟုန်ထိုးကျဆင်းတဲ့ အလေးချိန်ပါပဲ။ Low Carb နဲ့သွားနေတဲ့ ဒီနည်းဟာ Low Fat နဲ့သွားတဲ့ မူလလက်ဟောင်း အဆီချနည်းတွေထက် သိသိသာသာထိရောက်နေတာ အံ့သြစရာပါ။ Keto သမားတွေဟာ တစ်ပတ်ကနေ ၁၀ ရက်အတွင်း ကိုယ်အလေးချိန် သိသိသာသာကျပါတယ်။
ဝမ်းဗိုက်အခန်းတွေကနေ အဆီလောင်ကျွမ်းမှုတွေ ပိုမြင့်လာမယ်။
ကင်ဆာရောဂါတွေ ဖြစ်နိုင်ချေ လျော့သွားမယ်။
ဦးနှောက်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်တက်လာမယ်။
အမျိုးသမီးတွေဆို ဟော်မုန်း မျှတပြီး သားအိမ်ပိုင်း ပိုကျန်းမာလာစေတဲ့ ကောင်းကျိုးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
Ketogenic Diet အတွက် အချိန်တိုတွင်း ပိုထိရောက်ဖို့ဆို Intermittent Fasting ဆိုတဲ့ အစားအသောက်စားသုံးချိန် Pattern တစ်ခုနဲ့ တွဲလုပ်ရင်လည်း ပိုသိသိသာသာ ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေပါတယ်။ Keto နဲ့ IF က တွဲစပ် နာမည်ကြီးလာတာမို့ အစားအသောက်စားပုံနဲ့ စားချိန် သေသေချာချာ စနစ်တကျ လုပ်နိုင်လေ အကျိုးထူးလေပါပဲ။
ဒီလောက်ဆို Keto နဲ့ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ် အထွေထွေ သိရှိပြီးလောက်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လတ်တလော အမေရိကန်လိုနိုင်ငံကြီးတွေမှာပါ စွဲစွဲမြဲမြဲလုပ်ပြီး သိသာကြ၊ ဝေမျှလာကြတဲ့ ခေတ်အစားဆုံး Diet နည်းတစ်မျိုးကို မြန်မာနိုင်ငံက ကျန်းမာသွယ်လျပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ကျချင်တဲ့ သူများအတွက် ရည်ရွယ်ကာ အသေးစိတ်ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်၊ အထွေထွေဗဟုသုတ အားလုံး နားလည်သိမှတ်ပြီး လိုက်ကျင့်သုံးဖို့ Ketogenic Diet အကြောင်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံ တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 2:59 AM No comments:
Labels: ၀ိတ်ချနည်းများ, Health, ဆောင်းပါး
ထောပတ်သီးကြော် (Fried Avocado) - Koong Tung (ကွန်းထန့်) - မရန်းသီးနှင့် ကြက်အူဟင်း
ထောပတ်သီးကြော် (Fried Avocado)
ထောပတ်သီးက အလွယ်တကူ လျင်မြန်စွာ လုပ်စားလို့ရတဲ့ အဆာပြေအစားအစာပါ။ အိမ်မှာ ပျင်းလို့ပဲဖြစ်စေ၊ ဧည့်ခံပွဲအတွက် ဧည့်ခံချင်လို့ပဲဖြစ်စေ အလွန်အဆင်ပြေစေတဲ့ အဆာပြေအစားအစာလေးပါ။
ထောပတ်သီး - ၁ လုံး (အမြှောင်းလိုက် လှီးထားပါ)
ကြက်ဥ - ၁ လုံး (ခလောက်ထားပါ)
ငရုတ်သီးမှုန့် - ၁/၂ ဇွန်း
ပဲဆီ - လိုသလောက်
၁။ ဖန်ဇလုံထဲ ကြက်ဥ၊ ဆား၊ ငရုတ်သီးမှုန့်များ ထည့်ပြီး သေချာမွှေပါ။
၂။ အကြော်အိုးထဲ ဆီပူအောင် တည်၍ ဆီပူလာလျှင် ထောပတ်သီးဖတ်လေးများကို ကြက်ဥအနှစ်ထဲ တစ်ဖတ်ချင်းထည့်နှစ်ပြီး ဆီအိုးထဲ မပြည့်တပြည့် ထည့်ကြော်ပါ။ အိုးကျပ်နေအောင် မထည့်သင့်ပါ။ တစ်ဖက် ရွှေရောင်သန်းလျှင် တစ်ဖက်လှန်ပေးပါ။ ကြွပ်ရွနေအောင် ကြော်ပါ။
၃။ ဆီအိုးထဲမှ ဆယ်ယူပြီး မီးဖိုချောင်စက္ကူပေါ်မှာ တင်၍ ဆီစစ်ပါ။ ချက်ချင်းကြွပ်ရွလေးကို ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အချဉ်ရည်ဖြင့် တို့စားပါ။
ဒီပင်လယ်စာလေးကလည်း အခြားနိုင်ငံများကနေပြီး မြန်မာပြည်ရောက်လာတာ မကြာသေးပေမယ့် လူတော်တော်များများ ကြိုက်နှစ်သက်ကြပြီး ဆိုင်ကြီးတွေမှာ ဈေးကြီးပေး သွားစားလေ့ရှိတဲ့ စားပွဲပေါ်မှာတင်ပြီး စားရတဲ့ တုံယမ်းပင်လယ်စာလေး တစ်မျိုးပါ။ ဒီဟင်းပွဲလေးကိုတော့ ပိတ်ရက်မှာ သူငယ်ချင်း၊ မိသားစုများဖြင့် တပျော်တပါး လုပ်စားလို့ရအောင် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ပုစွန်တုပ် - ၃ ကောင်
ကဏန်း - ၃ ကောင်
သွေးခုံး - ၂၀ဝ ဂရမ်
ရေဘဝဲ - ၁၀ဝ ဂရမ်
ကင်းမွန် - ၁၀ဝ ဂရမ်
တုံယမ်းအနှစ် - ၂၀ဝ ဂရမ်
နို့စိမ်း - ၁ ဘူး
ငရုတ်သီးမှုန့် (အစပ်) - စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
ထောပတ် - စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
ကြက်သွန်ဖြူ - ၅ မြွှာ (နုပ်နုပ်စဉ်း)
၁။ သန့်စင်ထားသော ကဏန်း၊ ပုစွန်တုပ်၊ ခုံး၊ ရေဘဝဲ၊ ကင်းမွန်နှင့် ပြောင်းဖူးတို့ကို ပြုတ်ပါ။
၂။ အိုးတစ်အိုးထဲ ထောပတ်ထည့်ပြီး ကြက်သွန်ဖြူဆီသတ်ပါ။ ပြီးလျှင် ငရုတ်သီးမှုန့်၊ တုံယမ်း အနှစ်များ ဖောက်ထည့်ပါ။ နို့စိမ်းထပ်ထည့်၍ အရသာမြည်းပြီး ဆားထပ်ထည့်ပါ။
၃။ ထို့နောက် ပင်လယ်စာပြုတ်ထားသည်များ ထည့်မွှေပြီး အိုးပေါ်ကချကာ ဒီအတိုင်း စား၍ရသလို ထမင်းဖြူဖြင့်လည်း စားသုံးနိုင်ပါတယ်။
ပဲပုပ်မီးကင် - ၁ ချပ်
ကန်စွန်းရွက် - လက်တစ်ဆုပ်
ကြက်သွန်မြိတ် - လက်တစ်ဆုပ်
ဝက်ဆီဖတ် - ၅ ကျပ်သား
ကြက်သွန်ဖြူ - ၅ ဥ
ဆီ - ၂ ၁/၂ ကျပ်သား
အရသာမှုန့် - အနည်းငယ်
ကြက်သွန်ဖြူကို ဓားပြားရိုက်ထားပါ။ ကန်စွန်းရွက်သင်ထားပါ။ ကြက်သွန်မြိတ်ကို လက်တစ်ဆစ်အရွယ်ခန့် ဖြတ်ထားပါ။ ဝက်ဆီဖတ်ပါးပါးလှီးထားပါ။ ဆီပူလာလျှင် ကြက်သွန်ဖြူ
ဆီသတ်ပါ။ မွှေးလာလျှင် ဝက်ဆီဖတ်ထည့်ပြီး ရေနွေးအနည်းငယ်ထည့်ပါ။ ကန်စွန်းရွက်၊ ကြက်သွန်မြိတ်၊ ပဲပုပ်ထည့်ကြော်ပါ။ ဆား၊ အရသာ၊ သကြား ထည့်ပြီး မီးပြင်းပြင်းနဲ့ ခဏလေးသာ ကြော်ပါ။
မရန်းသီးနှင့် ကြက်အူဟင်း (Marian and Chicken Intestine Curry)
ကြက်အူကြိုက်ကြတဲ့သူများအတွက် ကြက်အူဟင်းကောင်းလေးတစ်ခွက် စားနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ပုံစံတစ်မျိုးလေးနဲ့ တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ချက်စားကြည့်လိုက်နော်။
ကြက်အူ - ၃၀ ကျပ်သား
မရန်းသီး - ၈ လုံး (ပါးပါးလှီးထားပါ)
ငရုတ်သီးမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ၁/၂ ဇွန်း
နနွင်းမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
ပုစွန်ငံပြာရည် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ၁/၂ ဇွန်း
နေကြာဆီ - စားပွဲဇွန်း ၅-၆ ဇွန်း (ဟင်းဆီသတ်ရန်)
စပါးလင် - ၁ ချောင်း (၃ ပိုင်းပိုင်းပြီး ထုထားပါ)
ကြက်သွန်ဖြူ - ၃-၄ မြွှာ (ထောင်းထားပါ)
ချင်း - လက်တစ်ဆစ် (ထောင်းထားပါ)
၁။ ကြက်အူများကို ခွဲ၍ မန်ကျည်းအနှစ်ရည်နှင့် နာနာဆုပ်နယ်ပြီး အရိအရွဲများကို ရေစင်အောင် ဆေးပါ။ ပြီးလျှင် ကြက်အူကို အနေတော် လက်သုံးဆစ်လောက် လှီးထားပါ။ ဆား၊ နနွင်းမှုန့်နှင့် ငံပြာရည်တို့ကို အနည်းငယ်ထည့်ပြီး နယ်နှပ်ထားပါ။
၂။ ထောင်းထားသော ကြက်သွန်နီ/ဖြူ၊ ချင်း၊ စပါးလင်၊ ငရုတ်သီးမှုန့်၊ နနွင်းမှုန့်၊ နေကြာဆီနှင့် ပုစွန်ငံပြာရည်တို့ကို ဆီသတ်ပါ။ အနံ့လေးမွှေးပြီး အရောင်လှလာလျှင် မရန်းသီးများထည့်ပြီး ဆီသတ်ပါ။ မရန်းသီး ပျော်လာပြီး ဆီပြန်လာလျှင် ရပါပြီ။
၃။ မရန်းသီးအနှစ်ထဲ ကြက်အူများရောထည့်ပြီး မွှေပါ။ အနှစ်ဖြင့် နှံ့အောင် သေချာမွှေပါ။ ၅ မိနစ်ခန့် အနှစ်ဖြင့် နှပ်ပြီးလျှင် ကြက်အူကိုရေမြုပ်အောင် ထည့်ပြီး တည်ပါ။
၄။ ရေခန်းပြီး ဆီပြန်လာလျှင် ဆားမြည်းပြီး လိုအပ်တာ ထပ်ဖြည့်နိုင်ပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 6:33 AM No comments:
[by ဆုမြတ်ဦး ]
စားသုံးသူတွေရဲ့ အသိပညာတိုးပွားလာတာနဲ့အမျှ လူတိုင်းက အစားအသောက် တစ်ခုစားတိုင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကို ကိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့ အချိန်တိုင်းမှာ စားသုံးဖို့ စိတ်ချရရဲ့လား၊ ဘာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တွေ ရထားလဲ၊ ဘယ်ကနေ ပေးအပ် ထားတာလဲဆိုတဲ့ အချက်တွေကို ပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာကြတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလိုအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ လက်မှတ်တွေအကြောင်း ဗဟုသုတတွေ၊ ဘယ်လိုရအောင် ကြိုးပမ်းရမယ်ဆိုတာတွေ၊ အစားအသောက်ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူတွေဘက်က ဒီလိုလက်မှတ်တွေ ရရှိအောင် ဘယ်လိုတွေကြိုးစားခဲ့ရလဲဆိုတာနဲ့ လက်မှတ်တွေ ရရှိ ထားတာကြောင့် စားသုံးသူတွေဘက်က ဘယ်လိုကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးတွေ ရရှိမလဲဆိုတာတွေကို စာဖတ်ပရိသတ်ကြီး သိရှိနိုင်အောင် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
FDA ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ
FDA လို့ အတိုကောက်ခေါ်နေတဲ့ Food and Drug Administration က အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန ဖြစ်ပါတယ်။ FDA ဆိုတာကတော့ ပြည်သူတွေ သုံးစွဲစားသောက်နေတဲ့ အစားအသောက်တွေ၊ ဆေးဝါးတွေ၊ ဆေးပစ္စည်းကိရိယာတွေ၊ အလှကုန်တွေကို ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဖို့အတွက် အဓိကထားလုပ်ဆောင်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး ဦးစီးဌာနလို့ဆိုပေမယ့် တကယ်လုပ်နေတာကတော့ အစားအသောက်ရော၊ ဆေးဝါးရော၊ ဆေးပစ္စည်းရော၊ အလှကုန်တွေရော ၄ မျိုးစလုံးကို လုပ်ဆောင်နေတာလို့လည်း သိရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ စားသုံးသူများက အသိပညာတွေတိုးပွားပြီး ခေတ်မီလာတဲ့အလျောက် စားသောက်ကုန်ပေါ်က အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များကို သေချာကြည့်ပြီး ရွေးချယ်ဝယ်ယူလာကြသလို အစားအသောက်ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူ တော်တော်များများကလည်း အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ရရှိရန် ကြိုးပမ်းနေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ FDA များကလည်း သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအလိုက် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ထုတ်ပေးနေပြီဖြစ်သလို မြန်မာနိုင်ငံ FDA က အစားအသောက်ပိုင်းအတွက် ထုတ်ပေးနေတဲ့ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အစားအသောက်ပိုင်း တာဝန်ယူထားတဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး ဦးစီးဌာနမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာမျိုးထွန်းကျော်က –
“FDA ကနေ အစားအသောက်တွေအတွက် GMP ဆိုတဲ့ Good Manufacturing Practice (ကောင်းမွန်တဲ့ထုတ်လုပ်မှုကျင့်စဉ်) မှာရှိတယ်ဆိုရင် သက်တမ်း၂ နှစ်ရှိတဲ့ ထောက်ခံချက်လက်မှတ် ထုတ်ပေးပါတယ်။ GHP ဆိုတဲ့ Good Hygiene Practice (ကောင်းမွန်သော သန့်ရှင်းမှုကျင့်စဉ်) နဲ့ညီတယ်ဆိုရင် သက်တမ်း ၁ နှစ်ရှိတဲ့ ထောက်ခံချက်လက်မှတ် ထုတ်ပေးပါတယ်။ ပြည်ပက တင်သွင်းလာတဲ့ အစားအသောက်တွေအတွက်ကတော့ IR (Import Recommendation) နဲ့ IHC (Import Health Certifi-cate) ဆိုတဲ့ လက်မှတ်တွေ ထုတ်ပေးပြီး ပြည်တွင်းမှာ ရောင်းချခွင့်ပေးထားပါတယ်။ ပြည်တွင်းကနေ ပြည်ပသို့တင်ပို့တဲ့ အစားအသောက်တွေအတွက်လည်း ER (Export Recommendation) နှင့် EHC (Export Health Certificate) တွေ ထုတ်ပေးထားပါတယ်။”လို့ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
စားသောက်ကုန်တွေ၊ အိမ်တွင်းအစားအသောက်ထုတ်လုပ်ငန်းများနှင့် အစားအသောက်ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ များပြားလာတာနဲ့အမျှ ဘယ်လိုစားသောက်ကုန်တွေကတော့ မစစ်မဖြစ် စစ်သင့်သလဲ၊ မစစ်ဘဲနေလို့ရော အဆင်ပြေရဲ့လားဆိုတာတွေက မေးခွန်းထုတ်စရာတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီလိုမေးခွန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါက်တာ မျိုးထွန်းကျော်က “FDA မှာ အစားအသောက်တွေကို လုံးဝစစ်ရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အများပြည်သူစားသုံးနေတဲ့ ဒီအစားအသောက်တွေကို Food Safety ဆိုတဲ့ အစားအသောက်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက် အဓိကဦးတည်ပြီး လုပ် ဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် ရောင်းချနေတဲ့ အစားအသောက်တွေက စိတ်ချရမှု တွေမရှိဘူးဆိုရင် စစ်ဆေးကြပ်မတ်ဖို့က FDA တာဝန်ဖြစ်နေပါတယ်။ လောလောဆယ် အနေအထားအရကတော့ ထုတ်လုပ်တဲ့ အစားအသောက်တိုင်း FDA မှာ အစစ်ခံရမယ်လို့ သတ်မှတ်မထားပါဘူး။ သို့ပေမဲ့လည်း သောက်သုံးနေတဲ့ သောက်ရေသန့်ကတော့ င်္ီဗ က ထောက်ခံချက် ယူကိုယူရမယ်။ ယူပြီးမှပဲ ဈေးကွက်မှာ တင်သွင်း ရောင်းချခွင့် ပေးထားပါတယ်။ ကျန်တဲ့အစားအသောက်တွေကတော့ FDA ထောက်ခံချက် လက်မှတ်လိုချင်ရင် လာပြီးလျှောက်ချင်လည်း ရတယ်။ မလျှောက်ချင်လည်း ဖြစ်တယ်”လို့ ပြောပါတယ်။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဆဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံခြားသားလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ဝန်ထမ်းများ တိုးပွားလာပြီး ဟိုတယ်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ခေတ်မီဈေးဝယ်စင်တာတွေ တိုးလာတာနဲ့အမျှ စားသောက်ကုန်တိုင်းမှာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များက မရှိမဖြစ် လိုအပ်လာပါတယ်။ အခုဆိုရင် ဈေးဝယ်စင်တာလို နေရာမျိုးတွေမှာ၊ အဆင့်မြင့် ဟိုတယ်ကြီးတွေမှာ မိမိရဲ့ စားသောက်ကုန်ကို တင်သွင်းရောင်းချမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလက်မှတ် မျိုးတွေ ပါကိုပါ ရမယ်၊ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တွေရမှ တင်သွင်းခွင့်ပေးမယ် ဆိုတာမျိုးတွေ ဖြစ်လာပါပြီ။
အစားအသောက်ထုတ်လုပ်သူ လုပ်ငန်းရှင်များဘက်ကလည်း မိမိတို့ကုန်ပစ္စည်းတွေ တင်သွင်းရာမှာ အဆင့်အတန်းမီမီဖြစ်ဖို့၊ စားသုံးသူများ ယုံကြည်လက်ခံလာဖို့အတွက် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိအောင် ကြိုးပမ်းလာကြပါပြီ။ ဒီလို ကြိုးပမ်းရာမှာ အခက်အခဲ မရှိရလေအောင် ဘယ်လိုအဆင့်ဆင့်လျှောက်ထားရမှာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ “FDA ထောက်ခံချက်လိုချင်တဲ့ စက်ရုံတွေဆိုရင်တော့ အရင်ဆုံး တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့ FDA ရုံးခွဲတွေကို အရင်သွားရမယ်။ လျှောက်လွှာပုံစံကို ယူရမယ်။ လျှောက်လွှာပုံစံနဲ့အတူတူ လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေ အနည်းဆုံး ၁၄ ချက်ရှိပါတယ်။ ဒီစာရင်း ရေးထားတဲ့စာရွက်ကို ပေးလိုက်မှာပါ။ လုပ်ငန်းရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မန်နေဂျာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တာဝန်ရှိတဲ့လူကို ကျွန်တော်တို့ဆီက ဒုကြီးကြပ်ရေးမှူးက ပုံစံကို ဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲ။ အချက် ၁၄ ချက်က ဘာတွေ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို အသေးစိတ်နားလည်တဲ့အထိ ရှင်းပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချက်တွေမှာ ဘာတွေပါလဲဆိုရင် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် လျှောက်လွှာပုံစံပါမယ်။ ထုတ်လုပ်မယ့် ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား၊ ထုတ်လုပ်မယ့် စက်ရုံရဲ့ Layout Plan တွေ၊ စက်ရုံရဲ့ အတွင်း အခန်းဖွဲ့စည်းပုံတွေ၊ သူ့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို စာနဲ့ဖော်ပြတာတွေ၊ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းနဲ့ ဖော်ပြတာတွေ၊ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ကျန်းမာကြောင်း ထောက်ခံချက်တွေ၊ ဆက်စပ်ဌာနတွေရဲ့ လိုင်စင်တွေ (စည်ပင်က ထုတ်ပေးထားတဲ့ လိုင်စင်၊ စက်မှုကြီးကြပ်က ထောက်ခံချက်လိုင်စင်) လိုအပ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဟာလာ (Halal) တံဆိပ်တပ်မယ် ဆိုရင်လည်း ဟာလာ (Halal) ထောက်ခံချက်ပေးခွင့်ရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းက ထောက်ခံချက်တွေ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုအချက်တွေ ပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်တော့ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်ဌာနခွဲတွေမှာ လျှောက်လွှာတင်လို့ ရပါပြီ” လို့ ၄င်းက ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများမှာ တွေ့ရတဲ့ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များမှာ HACCP, GMP, GHP, GAP, ISO စတဲ့ လက်မှတ်များဖြစ်ပြီး စာဖတ်သူများ ကြားဖူးနားဝ ရှိကြပါလိမ့်မယ်။ နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ သက်ဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ထုတ်ပေးတဲ့ FDA ဌာနများရှိပြီး အစားအသောက်တွေ၊ ဆေးဝါးတွေ၊ ဆေးပစ္စည်းကိရိယာတွေ၊ အလှကုန်ပစ္စည်းများကို စစ်ဆေးထောက်ခံပေးနေပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံများမှာရှိတဲ့ FDA တိုင်းက အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ FDA ကတော့ စက်ရုံတစ်ရုံမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ ထုတ်လုပ်မှု ကျင့်စဉ် GMP နဲ့ ညီတယ်ဆိုရင် ၂ နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့ ထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးပြီး ကောင်းမွန်သော သန့်ရှင်းမှုကျင့်စဉ် GHP နဲ့ ညီတယ်ဆိုရင် ၁ နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့ ထောက်ခံချက် လက်မှတ်ထုတ်ပေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ HACCP နဲ့ အခြားလက်မှတ်များကိုတော့ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းများမှ သက်ဆိုင်ရာဒေသအလိုက် စစ်ဆေးပြီး လက်မှတ်များကို ထုတ်ပေးနေတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြောင်းလဲလာတဲ့ခေတ်စနစ်အရ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရာမှာလည်း နည်းစနစ်တကျ ထုတ်လုပ်လာကြပြီဖြစ်ပြီး အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ရထားတဲ့ အစားအသောက်ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူများကလည်း များပြားလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ရထားတဲ့ထုတ်လုပ်သူများကလည်း နည်းစနစ်တကျ ထုတ်လုပ်နိုင်မှသာ ဒီလက်မှတ်များကို ထိုက်တန်စွာ ရရှိထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ရရှိဖို့ဆိုတာကလည်း လွယ်ကူတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ထုတ်လုပ်မှုတိုင်းမှာ အရေးကြီးသလို ဝန်ထမ်းသန့်ရှင်း ရေးမှအစ သုံးစွဲတဲ့စက်ပစ္စည်းများအဆုံး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ကိုက်ညီနေမှသာ လက်မှတ်များကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းသန့်ရှင်းရေးပိုင်းမှာဆိုရင် ခြေသည်း၊ လက်သည်းမှအစ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအထိ သေချာကြည့်ရှုနိုင်ရမယ်။ စက်ပစ္စည်းပိုင်းမှာလည်း ပုံမှန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး စက်ပစ္စည်းများအတိုင်းမဟုတ်ဘဲ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းသုံး စက်များကို အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသိအမှတ်လက်မှတ်များ ရရှိထားတဲ့ကုမ္ပဏီများထဲမှ မြန်မာစီပီလိုက်ဖ် စတော့ကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့် Three Star မှ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများကို မေးမြန်းခဲ့ရာမှာတော့-
အစားအစာထုတ်လုပ်ရေးဌာန (မြန်မာ စီပီလိုက်ဖ်စတော့ကုမ္ပဏီလီမိတက်) မှ လက်ထောက် ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်လင်းဇန်က “လက်ရှိမှာ စီပီရဲ့ စားသောက်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်တဲ့ စက်ရုံက ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်မှာ တည်ရှိပြီး နိုင်ငံတကာ အရည်အသွေး စံချိန်စံနှုန်းများအတွက် ISO 9001:2015, GMP and HACCP Certificate များကို ရယူထားပါတယ်။ ပြင်ဆင်မှုအပိုင်းမှာတော့ အရည်အသွေးပြည့်မီရေးကို ဦးတည်ပြင်ဆင် ရပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များနဲ့ လက်မှတ်ရယူဖို့ အဆင့်များ၊ သတ်မှတ်ချက်များကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရပါတယ်။ Awareness ရရှိဖို့ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများကို သင်တန်းပေးရပါတယ်။ Gap Analysis လို့ခေါ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကို အသေးစိတ်ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာ လက်မှတ်များရယူဖို့အတွက် မိမိတို့ ဘက်က လိုအပ်ချက်ရှိတာတွေကို ဖော်ထုတ်မှတ်သားရပါတယ်။ ပြီးတော့ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။ အဲဒီအဆင့်ပြီးရင် Prerequisite Program ကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများအတွက် လုပ်ဆောင်မှုအပိုင်း အဆင်ပြေစေဖို့ ချမှတ်ပေးပြီး လက်မှတ်ရယူရန် အသင့်ဖြစ်စေပါတယ်။ နောက်ဆုံးအဆင့်မှာ လက်မှတ်ထုတ်ပေးတဲ့အဖွဲ့ရဲ့ လာရောက်စစ်ဆေးမှုကို ခံယူပြီးတော့ အောင်မြင်ပြီး လက်မှတ်ရရှိပါတယ်။ Management ရဲ့ ကူညီပံ့ပိုးမှုများကြောင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ရယူရာမှာ အခက်အခဲမရှိပါဘူး” လို့ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များအတွက် ပြင်ဆင်ကြိုးပမ်းထားပုံကို ဖြေကြားထားပါတယ်။
Three Stars (Snack Mandalay Co.,Ltd.) မှ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာ ပြည့်ဖြိုးအေးကလည်း Three Star က ရရှိထားတဲ့ လက်မှတ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီး “ကျွန်တော်တို့ Three Star က ဥရောပနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံမှ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် EU & USDA Organic Certificate ကို ရရှိထားပါတယ်။ နယ်သာလန်က ပေးထားတဲ့ အစားအသောက် ဘေးကင်းလုံခြုံတယ်ဆိုတဲ့ GMP လက်မှတ်လည်း ရရှိထားပါတယ်။ GMP ဆိုတာက Good Manufacturing Practice ပါ။ နောက်တစ်ခုကတော့ HACCP ဆိုတဲ့ Hazard Analysis Critical Control Points ပါ။ အဲဒါကလည်း အစားအသောက် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး လက်မှတ်ပါ။ နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ ISO 22000 ဖြစ်ပြီး ဒီလက်မှတ်ကတော့ GMP, HACCP, ISO 9001 ဆိုတဲ့ ၃ ခု ပေါင်းထားတဲ့ စနစ်ရှိကြောင်း၊ ဒီစနစ်က အကောင်အထည်ဖော်ပြီး လည်ပတ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကို စစ်ဆေးပြီး ပေးထားတဲ့ လက်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ FDA က ပေးထားတဲ့ ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ်တွေ၊ နောက်ပြီး ဟာလာ (Halal) လက်မှတ်တွေလည်း ရထားပါတယ်။ လူမျိုးဘာသာမရွေး စားသုံးနိုင်အောင်ဆိုပြီး ဟာလာ (Halal) လက်မှတ်ကိုလည်း ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဟာလာကိုတော့ ပြည်တွင်းရော၊ ပြည်ပမှာပါယူထားပါတယ်။ ထုတ်လုပ်တဲ့အဆင့်တွေတိုင်းမှာ QC (Quality Control) တစ်ယောက်က အဆင့်တိုင်းကို လိုက်စစ်တယ်။ ထုတ်လုပ်မှုပိုင်း တာဝန်ယူထားရတဲ့ သူကလည်း ချမှတ်ထားတွေ လုပ်တယ်။ QC ရော၊ ထုတ်လုပ်ရေးပိုင်းက လူတွေရော ဒီလိုတာဝန်တွေကို သေချာအောင် ဆောင်ရွက်နေရဲ့လား ဆိုတာကို QA (Quality Assurance) တစ်ယောက်က ထပ်စစ်တယ်။ ဒီလိုအဆင့်ဆင့် လုပ်ပြီးမှသာ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ ငရုတ်သီးမှုန့်က ထွက်လာတာပါ။ ဒီလိုထွက်လာပြီဆိုရင် နိုင်ငံခြားဈေးဝယ်သူတွေ လက်ခံတဲ့ ဓာတ်ခွဲခန်းတွေကို ပို့ပေးရတယ်။ နိုင်ငံခြားကို တင်ပို့တဲ့အခါမှာ သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေ၊ စံချိန်စံနှုန်းတွေနဲ့ အကုန်ကိုက်ညီမှုတွေ ရှိနေရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အဆင့်ဆင့်လုပ်ထားတာတွေက လည်ပတ်ပြီး မှတ်တမ်း အနည်းဆုံး ၆ လရှိတော့မှ GMP, HACCP, ISO ဆိုတာတွေကို စလျှောက်လို့ရတာပါ။ စလျှောက်တော့မှ နယ်သာလန်က နမူနာတွေယူပြီး စစ်တယ်။ စစ်ပြီး လိုအပ်ချက်တွေကို ပြောပြတယ်။ ဒါတွေကို ကျွန်တော်တို့က ပြင်ဆင်မှ လက်မှတ်တွေ ထုတ်ပေးတာပါ”
“ဒီလက်မှတ်တွေရဖို့အတွက် ဝန်ထမ်းတွေကို တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးကအစ စက်ရုံသန့်ရှင်းရေးပိုင်းတွေအထိ လေ့ကျင့်ရေးကို အနည်းဆုံး ၁ နှစ် ပေးထားရတယ်။ စက်ရုံဆောက်လုပ်ရာမှာ စက်ပစ္စည်းတွေကိုလည်း နိုင်ငံခြားစံချိန်မီအောင် တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကုန်ပစ္စည်းတွေကို အပြင်က ပစ္စည်းတွေ ရောဖို့နေနေသာသာ ထွက်လာတဲ့ သံစလေးတွေကိုတောင် သံလိုက်စက်ကွင်းနဲ့ ဖမ်းပြီး စစ်ထုတ်ထား တာပါ။ စားသုံးသူတွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေအနေနဲ့ စင်ပေါ်က ကျွန်တော်တို့ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ ကြိုက်တဲ့အထုပ်ကို ဖောက်သုံးလိုက်ပါ။ တည်ငြိမ်တဲ့အရည်အသွေးတစ်ခုကို ရရှိမှာပါ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ထုတ်ကုန်တွေက ကောင်းမွန်စွာ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့ အချက်တွေကို ဒီလက်မှတ်တွေကနေတစ်ဆင့် အာမခံပေးနိုင်ပါတယ်”လို့ေပြောပြခဲ့ပါတယ်။
အစားအသောက်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုပေါ်မှာ ရိုက်နှိပ်ထားတဲ့ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များက စားသုံးသူများရဲ့ ကျန်းမာရေးပေါ်မှာ အများကြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ အစားအသောက်နဲ့ ဓာတ်မတည့်သူများရှိရင် ကုန်ပစ္စည်းပေါ်မှာ ရိုက်နှိပ်ထားတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းများပေါ် မူတည်ပြီး ရှောင်ရှားနိုင်ကြမယ်။ အစားအစာ ဘေးအန္တရာယ်များမှ ကင်းဝေးပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ကျန်းမာရေးကို ရရှိလာပါမယ်။ ဒီလိုကျန်းမာတဲ့ပြည်သူတွေက နိုင်ငံ့စီးပွားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာ များစွာ အထောက်အကူပေးနိုင်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
မြန်မာစီပီလိုက်ဖ်စတော့ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ဦးဇော်လင်းဇန်က စားသုံးသူများအတွက် ရရှိလာမယ့် ကောင်းကျိုးများနဲ့ပတ်သက်ပြီး “စားသုံးသူများအနေနဲ့ မိမိစားသောက်တဲ့ အစားအစာအပေါ် ယုံကြည်မှု ပိုမိုလာစေပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများကို လိုက်နာတဲ့အတွက် သန့်ရှင်းမှုနှင့် အစားအစာ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းစေတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိစေတယ်။ စားသုံးသူများ၏ ယုံကြည်မှုရရှိခြင်း၊ စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့် ဆက်လက်ဝယ်ယူလိုမှုရရှိခြင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်ဆင့်ကို ပြန်လည်ခြေရာခံနိုင်ခြင်း၊ အစားအစာ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းစေခြင်း၊ ထားသိုပုံနှင့် သယ်ယူခြင်းအဆင့်ဆင့်မှာလည်း စံချိန်အတိုင်း ဖြစ်စေခြင်း၊ ဆက်လက်ထိန်းထားဖို့အတွက် ဌာနတိုင်းမှာ သတ်မှတ်ထားသော Quality Policy အတွက် Quality Goals များ ရှိပါတယ်။ သတ်မှတ်ချက်များ ပြည့်မီအောင် ထာဝစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါတယ်” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက ထိုင်းနိုင်ငံက ဆေးရုံတွေမှာ သုံးထားတဲ့ ဆေးကုသစရိတ်တွေကို အရမ်းသုံးထားတာ တွေ့ရတယ်။ “မြန်မာနိုင်ငံမှာ Silent Suicide လုပ်နေတာ တွေများတယ်”လို့ ဂျပန်နိုင်ငံက မိတ်ဆွေတစ်ဦးက ပြောတယ်။ Silent Suicide ဆိုတာကတော့ မသိဘာသာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ အရာတွေကို လုပ်နေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေက ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မသန့်ရှင်းတဲ့ စားသောက်ကုန်တွေ စားနေလို့ပါ။ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တွေ ရထားတဲ့ စားသောက်ကုန်တွေကို ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်တော့ စားသုံးသူတွေဘက်က ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်” လို့ Three Star မှ ဒေါက်တာပြည့်ဖြိုးအေးက မှတ်ချက်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
နောင်လာမယ့်အချိန်တွေမှာ စီးပွားရေးတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှ FDA က ပြည်တွင်းပြည်ပ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများကို ဒီထက်ပိုမိုစိစစ်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ ထောက်ခံချက်များ ပေးလာနိုင်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်တဲ့ စားသောက်ကုန်များကြောင့် စားသုံးသူပြည်သူများ ဒီထက်ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ ဘဝတွေပိုင်ဆိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ လုပ်ငန်းရှင်များဘက်ကလည်း မိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားတစ်ခုတည်း မကြည့်ဘဲ စားသုံးသူပြည်သူများရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ပိုမိုအလေးပေး ဂရုစိုက်ပြီး အဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်လာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
HACCP – (Hazard Analysis Critical Control Points) ဘေးအန္တရာယ်စစ်ဆေးပြီး အဓိက ထိန်းချုပ်ရေးအချက်များ (ဘစအထခ)
ဘေးအန္တရာယ်စစ်ဆေးပြီး အဓိကထိန်းချုပ်ရေးအချက်များမှာ လုပ်ငန်းစဉ် (၇) ရပ် ရှိပါတယ်။ အဲဒီလုပ်ငန်းစဉ်များကတော့ ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်မည့် အချက် များကို ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း၊ အဓိကထိန်းချုပ်နိုင်မည့် အချက်အလက်များ ရှာဖွေခြင်း၊ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် အတိုင်းအတာ ပမာဏကို ချမှတ်ခြင်း၊ အစဉ်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည့် အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း၊ ပြန်လည်ပြင်ဆင် အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် စီစဉ်ခြင်း၊ ထပ်မံအတည်ပြုနိုင်မည့် လုပ်ငန်းစဉ် ရေးဆွဲခြင်း၊ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ ထားရှိနိုင်ရန် အစီရင်ခံစာ ရေးသားပြုစုရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို စီစဉ်ဆောင်ရွက် ခြင်းတို့ ပါရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
GMP – (Good Manufacturing Practice) ထုတ်လုပ်မှုအလေ့အကျင့်ကောင်းများ
ထုတ်လုပ်မှုအလေ့အကျင့်ကောင်းများမှာတော့ စားသောက်ကုန် ကုန်ကြမ်းများမှ ကုန်ချောရောက်သည်အထိ ကွင်းဆက်တစ်ခုလုံးမှာ စနစ်တကျဆောင်ရွက်ကြလျက် လိုက်နာရမယ့် စည်းကမ်းအချက်အလက်များကို အတိအကျလိုက်နာစောင့်ထိန်းပြီး ထုတ်လုပ်မှု အဆင့်ဆင့်မှာလည်း ကောင်းမွန်သော အလေ့အကျင့်ကောင်းများ ကျင့်သုံး ထုတ်လုပ်ခြင်းများ ပါဝင်ပါတယ်။ ဥပမာ- လက်အိတ်များ ဝတ်ဆင်ပြီး ခူးဆွတ်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းသော အိုး၊ ခွက်၊ ခြင်း၊ တောင်းများကို အသုံးပြုခြင်း၊ လက်ဆေးရာတွင် စနစ်ရှိခြင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ထုတ်လုပ်သူလုပ်သားများကို သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စွာ စီစဉ်၍ ဂရုစိုက်ထုတ်လုပ်ခြင်းများ ဖြစ်ပါတယ်။
GAP – (Good Agricultural Practice) စိုက်ပျိုးမှုအလေ့အကျင့်ကောင်းများ
စိုက်ပျိုးရေးအလေ့အကျင့်ကောင်းများဆိုသည်မှာ မြေပြုပြင်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည်မှ စားသုံးသူလက်ဝယ်ရောက်သည်အထိ ထုတ်လုပ်မှုတိုင်းမှာ စားသုံးသူများအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော ညစ်ညမ်းမှုများ၊ ပိုးသတ်ဆေးအန္တရာယ်များ အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် လိုက်နာရမယ့် စံလုပ်ထုံးလုပ်နည်း လမ်းညွှန်မှုများ ဖြစ်ပါတယ်။ စိုက်ပျိုးမှုအလေ့အကျင့်ကောင်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်းရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ စိုက်ပျိုးစဉ်အချိန်မှ ရိတ်သိမ်းပြီးအချိန်အထိ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့် သစ်သီးများကို ပိုးမွှားများ ဝင်ရောက်ခြင်းမှ လျှော့ချနိုင်ခြင်း၊ အလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာရေး၊ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး အပါအဝင် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးစဉ် အသုံးပြုသည့် ရေစနစ်သန့်ရှင်းခြင်း၊ စားသုံးသူများထံသို့ စိတ်ချရသော ရိတ်သိမ်းပြီး အသီးအနှံများကို ပို့ဆောင်ပေးခြင်း စသည့်အချက်အလက်များ ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
GHP – (Good Hygiene Practice) မှန်ကန်သောသန့်ရှင်းခြင်း အလေ့အကျင့်ကောင်းများ
မှန်ကန်သောသန့်ရှင်းခြင်း အလေ့အကျင့်ကောင်းများဆိုတာကတော့ သန့်ရှင်းရေး အလေ့အကျင့်ကောင်းများကို အသုံးပြုပြီး ကောင်းမွန်သော ကျန်းမာရေးအခြေအနေများကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းအချက်အလက်၊ လမ်းညွှန်ချက်များဖြစ်ပါတယ်။ အစားအသောက်များကို ကိုင်တွယ်ခြင်းမှ ဓာတုနည်းအရ၊ ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာအရနှင့် ဇီဝနည်းအရ ဝင်ရောက်လာမယ့် မလိုလားအပ်တဲ့ အန္တရာယ်များကို လျှော့ချနိုင်အောင် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ မှန်ကန်သော သန့်ရှင်းခြင်း အလေ့အကျင့်ကောင်းများမှာတော့ အစားအသောက်ကိုင်တွယ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ဖြန့်ချိခြင်းတို့မှာ စိတ်ချစွာ ကိုင်တွယ်အသုံးပြုခြင်း စသည့်အချက်များ ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ISO ကို ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့က ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျီနီဗာမြို့မှာ စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်း စံချိန်စံညွှန်း သတ်မှတ်ချက်များအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ စတင်တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ အစားအသောက် လုံခြုံစိတ်ချရခြင်း၊ စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ခြင်း စသည်တို့အတွက် စက်ရုံများက ထုတ်လုပ်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် နည်းပညာများအထိ စစ်ဆေးခြင်းများအတွက် စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ချက်များက၂၀ ကျော်ရှိပါတယ်။
ဒေါက်တာကျော်ငြိမ်းအေး ဟအချိန်ပိုင်းပါမောက္ခ (ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်)၊ အစာအာဟာရဆိုင်ရာ သိပ္ပံပညာရပ်]
Posted by Alex Aung at 8:19 AM No comments:
Labels: Food & Drinks, နည်းပညာ, ဆောင်းပါး
Tech Gadgetရဲ့ ဒုတိယမြောက် Tech Translate Article ကိုတော့ ထွက်ပြီးတော်တော်နောက်ကျမှ လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ မှန်ပါတယ် - Flagship Killer ကနေ Flagship ဖြစ်လာတဲ့ OnePlus7Pro ပါ။ ဒါပေမယ့် အရင်ဆုံး Tech Translate Intro ဝင်ပါမယ်။
Translate ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းက အလွယ်ပြောရရင် တခြားမြင်မြင်သမျှ Tech Page တွေက လုပ်နေသလို English လိုရေးထားတဲ့ Tech သတင်းတွေကို မြန်မာလိုပြန်ရေးတင်တာပါ။ Tech Gadget ကသာ နည်းနည်းကြောင်တောင်တောင်နိုင်ပြီး Tech News အစား Tech Translate လို့ နာမည်ပေးဖြစ်တာ... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြောချင်တာက ဒီ Articles တွေမှာ ကိုယ်ပိုင် Thoughts/Concept တွေပါလာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တောင် ဒါက သိပ်ပြီးအားမစိုက်ထားတဲ့ Page မှာ Engagement လိုချင်ရုံသပ်သပ် စာတွေဆိုတာပိုမှန်ပါတယ်။ ကြိုပြောထားတော့ တကယ်လို့ အားမရတာ၊ ထပ်ဆွေးနွေးချင်တာရှိတယ်ဆိုရင် အောက်က Comment မှာ Rude Language မဟုတ်တဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Language နဲ့မေးနိုင်ပါတယ်... မေးခွန်းနားလည်ခဲ့ရင် ပြန်ဖြေပေးပါမယ်။ ဤကား စကားချပ်။
Posted by Alex Aung at 5:44 AM No comments: